Uploaded by ye win
အန်တီအေးမာ (18+) by- bluegyi
အရမ်းကာင်းတာပဲသားသားရယ် (+18) by- bluegyi
ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်တည်းက မိဘတွေဆုံး သွားတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော်နဲ့ လာနေပေးတယ်။ သူကလည်း
လူလွတ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အိမ်ထောင်နဲ့ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ကိုးတန်းအရောက်မှာ ဦးလေးဟာယဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားပြန်တယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော့မှာ သူမိန်းမနဲ့ ကျန်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် မိဘကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်လေးရဲ့ အောက်ထပ်ကို ကျောင်းဆရာမ
သားအမိအားငှားပြီး ဦးလေးမောင်းခဲ့တဲ့ အငှားကားလေးကိုတော့ ကိုလူလေးဆိုတဲ့ လူကိုအုံနာခလေးနဲ့ မောင်းခိုင်းထားတယ်။ ဒိလိုနဲ့
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းရောက် လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့။
တစ်ရက်ကျတော့ကျတော့ ကျွန်တော်ကျောင်းဆင်းတော့ နည်းနည်းစောသေးတာနဲ့ အန်တီလေးကိုရုံးမှာဝင်ကြိုလိုက်မယ်ပေါ့.
"ဟဲ့ကိုရဲ ဘယ်သွားမှာလဲ"
အသံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နားကမရီရီသန်းဖြစ်နေတယ်.သူကအန်တီလေးနဲ့ တစ်ရုံးတည်းမှာ လုပ်တာ
ကျွန်တော့အပြောလည်းကြားကော မရီကပြုံးစိစိနဲ့ 
"နင့်အန်တီလေး ဒီနေ့ အစည်းအဝေး ရှိလို့ နောက်ကျမယ်ဟဲ့. ငါလည်းပြန်မှာငါနဲ့ လိုက်ပြန်လိုက်ခဲ့ တော့"
ဲ ည်းနည်းပျော်သွားတယ်.ကျွန်တော်မှာအရွယ်လေးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရပ်ကွက်ထဲကအပျို
အအိုမကျန် တောင့် တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆို မှန်းပြီးဂွင်းထုနေရတာ. မရီတို့ ဆိုတာထိပ်ဆုံးကပေါ့.ညနေပိုင်းအပြန်ဆိုတော့ကားက
"ဟဲ့ဘာလဲ ငါနဲ့ မပြန်ဘူးလား"
မရီကစိတ်မရှည်တော့သလိုပုံနဲ့ ပြောတော့မှပဲ ကျွန်တော်လည်းအတွေးတွေထဲ ကလွတ်လာတော့တယ်.
" အာမဟုတ်ပါဘူး မရီနဲ့ ပြဲ ပန်ရတော့မှာပေါ့"
ကျွန်တော့အဖြေကြားတော့သူမက ကျေနပ်သလို တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး
လို့ ဆိုလိုက်ပြီး ရှေ့ကထွက်သွားတော့တယ်. ကျွန်တော်ကတော့နောက်ကနေပြီးမရီရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အ၀ကြည့်သည်ပေါ့လေ.
မရီကအသက်၂၈ လောက်တော့ရှိပြီ ထွားတယ်ဆိုတာထက် တောင့်တယ်လို့ြေ်ပာရင်ပိုမှန်မယ်.မရီလမ်းလျှောက်ရင် သူမရဲ့ တင်သား
ကြီးတွေက အခြားအမျိုးသမီးတွေလို ခါရမ်းမနေဘူးဗျ. အပေါ်တတ်အောက်ဆင်းနဲ့ သိပ်ကြည့်လို့ ကောင်းတာ.သူမရဲ့ တင်သားတွေ
ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေ့ကျမှကျွ န်တော်ကလည်း အတွင်းခံမဝတ်ထားမိဘူး။ ဆယ်တန်းလောက်ဆိုတော့ ဝတ်တချက်မဝတ် တချက်ပေါ့ဗျာ။
ဟဲ့ ...... ဘာလုပ်နေတာလဲ မြန်မြန်လာ .... မရီအသံကြားတော့မှပဲ ကျွန်တော်လည်း သတိဝင်သွားပြီးထကြွနေတဲ့ညီလေးကို
လက်နဲ့အသာဖိပြီး မရီနောက်က လိုက်သွားမိတော့တယ်။ တော်သေးတယ် ဘက်စ်ကားဂိတ်ရောက် ရောက်ခြင်းပဲကားရတယ်။
ဟဲ့ဟဲ့...... ခဏနေဦးကားပေါ်ရောက်ရင် ငါ့နောက်မှာနေနော် ..... မရီရဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်တော်နည်းနည်း အံအားသင့်သွားတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲ မရီအချိန်ကလူကျပ်တယ်ဟ ..... တော်ကြာ မသူတော်တွေနဲ့ တွေ့နေရင်စိတ်ညစ်ရမှာ စိုးလို့ ပြောရင်းဆိုရင်း
မရီကကားပေါ်အလုအယက် တက် နေတဲ့လူတွေရဲ့နော် ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။ ပြေးထွက်သွားတဲ့ သူမရဲနောက်မှာတော့ ကျန်နေခဲ့တဲ့
သူမရဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့ကို ရှူပြီလမ်းလျှောက်တိုင်း တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ခါသွားတဲ့တင်ပါးကြီးတွေကိုကြည်ပြီး ကျွန်တော်မှာသာ
ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ပြသနာက စတော့တာ။ စပယ်ရာကအတင်းအထဲ ထည့်တာနဲ့တစ်ယောက် တစ်နေရာစီလိုဖြစ်သွားတယ်။
မရီ ပြောထားသလို ကျွန်တော်က သူ့နောက်မှာ နေရာမရဘူး။ ဘေးခြင်းကပ်ရပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့ရှေ့ မှာကအန်တီကြီး
တစ်ယေက်မရီရဲ့ နောက်မှာတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်အရှေ့ က အန်တီကြီးက အသက်လေးဆယ်
ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။ နေဒါဏ်၊ လေဒဏ် ကြောင့်ထင်တယ် ..... အသားအရေက အညိုဘက်လုနေပေမယ့်အန်တီကြီးရဲ့
အင်္ကျီလည်ပင်းတဝိုက်က တစွန်းတစမြင်နေရတဲ့ အသားရေကြည့််ရတာ့ မူလကတော့ အသားဖြူပုံပါ။
ဘလောက်အင်္ကျီက အန်တီကြီးန့ဲနည်းနည်းကျပ်နေပုံပါ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကတော့ ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ခါးနားလေးမှာ
နည်းနည်းသိမ်သွားတယ်။ ခါးအောက်မှာတော့ ထွားကြိုင်းလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက ဘေးကိုစွန့်ကားနေပြီး နောက်ဘက်ကို
ဲီးစပ်နဲ့ တောင်ထိကပ်နေတယ်။ ကားကွေ တိုင်း သူမရဲ့တင်ပါးအိအိကြီးတွေက ကျွန်ကောင်လေးကို
ွ ပးသလိုကိုဖြစ်တော့ စောစောကထိန်းထားရတဲ့ ကောင်လေးဟာ ချက်ခြင်းကို ထကြွလာပါရော။ တချီမှာတော့ ကားကချိုင့်ထဲ
အကျကားကလည်း ဝုန်းကနည်းအခုန် ကျွန်တော့ ကိုယ်ပေါ်ကို အန်တီကြီးရဲ့ ကိုယ်ပါပိပြီးပါလာတယ်။ ကိုယ်လုံးနှစ်ခုလုံးက
နောက်ကိုယိုင်သွားတာဆိုတော့ အန်တီကြီးရဲ့ အောက်ပိုင်းနဲ့ ကျွန့်တော့် အောက်ပိုင်းလည်း ပူးကပ်သွားတာကျွန်တော့်
နွေးခနဲဖြစ်သွားတယ်။ အန်တီကြီးလည်း အတွင်းခံဝတ်ထားပုံမပေါ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဟန်ပျက်သွားတဲ့ ကိုယ်ကိုပြန်မက်တော့
ကျွန်တော်တော့လည်း လက်ရန်းကိုဆြွဲ ပီးပြန်မတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့ကောင်လေးဟာလည်း အန်တီကြီးရဲ့ဖင်ကြား
ထဲကို တောက်လျှောက်ပါသွားတာ အားနည်းနည်းပြင်းသွားတယ် ..... ထင်တယ် ။ အထဲကို ဒုတ်ခနဲသွားပြီးဆောင့်မိတယ်။
အန်တီကြီးကလည်း ကျွန်တော့်ကို လှည့်ကြည့်လာတယ်။ သူမရဲ့မျက်ဝန်းမှာ ဒေါသရိပ်တွေမြင်တော့ ဟိတ်ငါတော့သေပြီ၊ ဒါပေ့မယ့်
အန်တီကြီးက သူ့နောက်ကကျောင်းဝတ်စုံ နဲ့ ကျွ န်တော့ကိုမြင်တော့ မျက်ဝန်းတွေမှာ ဒေါသရိပ်တွေအစား အံ့ဩတဲ့အရိပ်အရောင်တွေ
အန်တီကြီး ဘာမှမပြောပဲပြန်လှည့်သွားတော့မှ ကျွန်တော်လည်းရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွား တော့တယ်။ အန်တီကြီးက
သူ့ဖင်တုန်ကြီးကို နောက်ဖက်ကို မသိမသာတချက်ခပ်တင်းတင်းလေး ကော့ကော့ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့ ကောင်လေးတစ်ခုလုံး
နွေးခနဲဖြစ်ပြီး ဖင်တုန်ကြီးရဲ့ ဟိုးအတွင်းဆုံးနား ထိရောက်သွားတယ်။ နောက်မှတ်တိုင်လည်း ရောက်ကော လူတွေထပ်တတ် လာတာနဲ့
ကျွန်တော်လည်း အလည်တန်းကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုဖြုတ်ပြီး ဘေးတန်းကိုကိုင်လိုက်တယ်။ အဲဒ
ီ့တော့မှ ကျွန်တော့ရဲ့ ကိုယ်လုံးဟာ
အန်တီကြီးကျောပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်။ အန်တီကြီးကလည်း ဘေးတန်းကိုင်ထားတာ ဆိုတော့သူ့ ဖင်တုန်ကြီးကို ကျွန်တော့ကို
ဒီလိုအနေအထား ဆိုတော့ အကြိုက်ပေါ့။ အန်တီကြီး နောက်ကနေပြီး ခါးကိုမသိမသားလေး တစ်ချက်နှစခ
ကော့ပြီးဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ လူတွေကလည်း အရမ်းကျပ်လားတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကြီး တစ်ခုလုံး အန်တိကြီးရဲ့
ဖင်ကြားထဲကိုဝင်သွားသူကရဲ့ဖင်ကြားထဲ့မှာ ကျပ်ကျပ်ညပ်ညပ်လေး။ ကျွန်တော်လည်း လူကျပ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး
လက်တစ်ဖက်ကို သူမရဲ့ခါးပေါ်ကို တင်လိုင်ပြီး နာက်ဖက်ကိုဆခ
ွဲါးကို ရှေ့ကိုတစ်ချက်ကော့လိုက်ရင်း မသိမသာလေး
ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ ကားကလည်း ခပ်ပြင်းပြင်းကိုလှော်နေတော့ လူကလည်း ကျပ်ကျပ်ကျွန်တော်နဲ့ အန်တီကြီးလည်း
ကားပေါ်မှာမသိမသာနဲ့ လှုပ်ရှားလာကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်း ဆော်တစ်ခါမှမချဘူး သေးတော့ အန်တီကြီးရဲ့ ဖင်တုန်ကြီးကို
နောက်ကထောက်ရတာ တော်တော်လေး ကောင်းနေတယ်။
ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့ဆီးစပ်က အန်တီကြီးရဲတင်ပါး အိအိကြီးကိုသွားထိတာ အိကနဲ့အိကနဲနဲ့ ကျွန်တော့ရ့လ
အန်တီကြီးရဲ့ဖင်ကြားထဲမှာ လျောထိုးနေတယ်။ တစ်ချက်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့လီးကြီးက အန်တီကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကို
အတွင်းထိသွားထောက်မိနေတယ်။ ကျွန်တော့်ရ့လ
ဲီးကြီးကလည်း သံချောင်းတစ်ချောင်းလို ကိုမာနေပြီ။ ပုဆိုးနဲအင်္ကျီသာမခံနေရင်
ဒါတောင်မှ တစ်ချက်တစ်ချက် နွေးကနဲ့နွေးကနဲ့ တစ်ခုခုကိုသွားထိနေသေးတယ်။ အန်တီကြိးကလည်း မခေဘူးဗျ သူဖင်တုန်ကြီးကို
နောက်ကိုမသိမသားလေး ကော့ကော့ပေးတတ်တယ်။ အန်တီကြီးအကော့ နဲ့ကျွန်တော့် အဆာင့်ဆုံလိုက်ပြီ ဆိုရင်သူ့ဖင်တုန်ကြိးကို
အိကနဲ့သွားဆောင့်မိတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့လက်ကိုအန်တီကြီးရဲ့ တင်ပါးပေါ်ကို
ကျွန်တော်လည်းသူ့ မျက်နှာအကဲခတ်လိုက်တော့ တော်တော်လေးကိုရဲတတ်သွားတာ.မရီကိုယ်လုံးလေးတွန့် သွားပြီး ပေါင်လည်းကွသွားတယ်. ပြသ၁နာတော့တတ်ပြီ.မရီဆီက အင့် ကနဲ အသံတောင်ထွက်လာတယ်. ကားကလည်းခုန်ဆိုတော့ သူ့ ခါ်းကိုဖက်ပြီးသုံးလေးချက်လောက်ဆောင့်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်.ခါးပေါ်ကတဆင့် မရီရဲ့ စွံ့ ကားတဲ့ဖင်လုံးကြီးပေါ်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ဖင်လုံးကြီးနှစ်ခုကခို ပ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆုပ်ချေလိုက်တယ်.နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုပါ မရီရဲ့ဖင်ကြီး နောက်ကတန်းကိုကိုင်သလိုနဲ့ဖင်သားကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကို အားရပါးရကိုင်ပြီး သူမရဲ့ပေါင်ရင်းက စောင်ဖုတ်နေရာလေးကိုမှန်းပြီး ခါးကိုသိပ်ပြီးကော်ထိုးလိုက်တယ်. ဖင်သားကြီးတွေက တင်းတင်းလုံးလုံးလေး ညှစ်လို့တော်တော်ကောင်းတာဗျ.ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းအကဲစမ်းချင်လာတာနဲ့မရီရဲ့ခါးကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုအောက်ကိုနည်းနည်း လျှောလိုက်တယ်.မရီရဲ့ ပေါင်ရင်းကိုမှ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး သွားဆောင့်မိတယ်လေ. မရီလည်း ကျွန်တော့ကို မျက်လုံးပြူးပြီး တချက်ကြည့်တယ်. လက်ကဖင်လုံးကြီးကို ကိုင်နေသလိုရှေ့ ကလည်းမရီရဲ့အောက်ပိုင်းကို ထောက်ပြီးညောင့်လိုက်တယ်.မာန်ကျသွားသလို ဖြစ်နေတဲ့ ကြီးကလည်းချက်ချင်းကိုတောင်တတ်လာတယ်.mmcybermedia. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကားကလည်းသုံးလေးချက်လောက်ကို ဆက်တိုက်ခုန်ပါလေရော. Pdf-LA Page3.com မသိမသာပြောင်းတင်လိုက်ပြီး ဖင်တုန်ကြီးကို အားရပါးရကို ကိုင်ပြီးချေမွလိုက်တယ်။ အန်တီကြီးရဲ့ဖင်ကြီးက မတင်းမပျော့လေး ကိုင်လိုက်တာလက်ထမှဲာ ခပ်ထွေးထွေးလေးဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အန်တီကြီးက သူ့ဖင်တုန်ကြီးကိုနေ ရာရွေ့သလိုနဲ့ဟို ဘက်ဘက် ယိမ်းလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့လိးကြီးက သူမရဲ့ဖစ်တုန်ကြီးကြားမှာ အမွေခံရသလို ဟိုထိုးမိထိုးမိနဲ့။ လိုနဲ့ကျွန်တော့်တို့နှစ်ဦးအပေးအယူ မျှလာကြတာစပယ်ယာကမှတ်တိုင်အော်တော့မှပဲ သတိဝင်လာတယ်။ ကြို့ကုန်းပါလား အေးပါတယ်အန်တီကြီးက စပယ်ယာကိုပြန်အော်လိုက်ရင်းသူ့ ဖင်တုန်ကြီးကို နောက်ကိုတစ်ချက် ခပ်တင်းတင်း လေးကော့ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးပိတ် ဖင်တုန်ကြီးကို နှစ်ချက်လောက် ညောင့်လိုက်သေးတယ်။ အန်တီကြီး လူတွေကိုတိုးပြီး ထွက်သွားတော့မှ ကျွန်တော်လည်း မရီကိုသတိရတော့တယ်။ ဟာမရီဘယ်မှာလဲ တွေ့ပါပြီမရီကို ကျွန်တော်နဲ့ လူနှစ်ယောက်ကျော်လောက်မှာ မျက်နှာကြီးနီလို့။ သူ့နောက်ကိုကြည့်မှ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ကုလားတစ်ကောင်။ မရီကိုလာလာ ကျွန်တော်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ မရီကိုမမှီမကန်းလှမ်း ဆွဲလိုက်ပြီးလွတ်သွားတဲ့ အန်တီကြီးနေရာမှာ ထည့်လိုက်တယ်။ လူကြားထဲက အတင်းတိုးထွက်လာတာ ဆိုတော့သူမရဲ့ ကိုယ်တစ်ပက်လည်ပြီး ကျွန့်ရှေ့ရောက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ တော်သေးတာပေါ့လယွ် အိပ်ကိုရှေ့မှာကာထားလို့ပေါ့။ မဟုတ်ရင် စောစောအရှိန်ကြောင့်ကျွန်တော့ကောင်လေးက လာနေတုန်းပဲ။နင်ကလည်း ငါ့အနောက်မှာနေပါဆိုမှပဲ မရီကခေါင်းကိုငုံ့ ထားရင်းခပ်တိုးတိုးလေး ဆိုတယ်။ အရှက်မပြေသေးပုံပါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီရေဲနတုံးပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ပြန်မဖြေတော့ဘူးကိယအ့်ာရုံနဲ့ ကိုဆိတော့်သူ့ကို ဂရုစိုက်မိဘူးလေ။ မှတ်တိုင်အရောက်လူ တွေက ထပ်တတ်လာတော့ ကားပေါ် တော်တော်လေးကြပ်သွားတယ်။ အားနာတယ်မရီစားကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှပဲ လွယ်အိပ်ကစာအုပ်တွေနဲ့ ဆိုတော့ သူ့ပေါင်ရင်းက သွားထောက်နေတယ်။ လွယ်အိပ်ကိုဘေးကို ဆွချဲလိုက်ရတော့ သူမနဲ့ကျွ န်တော့နဲ့ ထပ်ရပ်လေးကပ်သွားတယ် ။ ++++++++++++++++++++++++++++++ မရီနဲ့ ကျွန်တော်က အရပ်ချင်းမတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့မရီရဲ့ပေါင်ရင်းကို ကြီးကသွားထောက်မိနေတယ်. ဒါပေမယ့်နောက်ကဖိလာတဲ့လူအားကြောင့် မရီကိုဖိထောက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်. ဒါပေမယ့်ဘာမှတော့ မပြောဘူး. ပြီးတော့ ကျွန်တော့လက်တွေကို မသိမသားလေး ဆွဲဖြုတ်လာရော.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.ကျွန်တော်လည်းဘယ်ရမလဲ လက်တဖက်ကဖင်သားတွေကို ပိုပြီးဆွညှဲစ်လိုက်ပြီးတော့ လက်တဖက်ကိုရှေ့ဖက်ရွေ့ လိုက် ပြီးထမီပေါ်ကနေပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်.မရီဘာမှမပြောတာ သေချာတော့ ကျွန်တော်လည်း ရဲသွားပြီလေ. ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ကို နောက်ကိုယို့ ပြီး ရှောင်လိုက်ပါသေးတယ်. အရွယ်ရောက်ကာစတည်းကမှန်းလာတာ ဆိုတော့ လွှတ်တော်မလွှတ်ချင်ဘူး.ကျွန်တော်လည်းမရီကို ရှောင် နေရတာဆိုတော့ရုတ်တရက် ဟန်ချက်ပျက်သွားပြီး လှမ်းဆွဲလိုက်တာ တန်းကိုမမိပဲ မရီရဲ့ခါးကို သွားဆွဲမိတယ်.
လီးကြီးကလည်း မရီရ့ေဲစာက်ဖုတ်လေးကိုမှ ကွက်တိကို သွားထောက်မိနေတော့တယ်.ဒါတောင်မှ ခါးကိုမသိမသာနဲ့ ကော့ကော့ပြီးဆောင့်လိုက်သေးတယ်. အမှန်တော့ ကိုယ့်အကြံနဲ့ ကိုယ် . ဒီလမ်းလေးက ညနေလောက်ဆိုတာနဲ့လူသွားလူလာ ကျဲသွားတတ်တယ်.မှောင်လေဲမှာင်တယ်လေ. လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ ပကျွဲန်တော်တို့ လမ်းဘက် မချိုးခင် လမ်းကြားလေးကိုရောက်လာတယ်. ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလူတွေနဲ့ဝေးနေတုံးလေး လက်ကိုမရီရဲ့ဖင်လုံးကြီးပေါ်ကို တင်ပြီး တချက်ညှစ်လိုက်တယ်.mmcybermedia.com "ကိုရ"ဲ သတိပေးသလိုကျွန်တော့ကိုခပ်တိုးတိုးလေးခေါ်တယ်. တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း လီးကြီးက ဖင်လုံးကြီးကို အိကနဲ အိကနဲ သွားထောက်မိနေတာနဲ့ တောင် စိတ်တွေကတော်တော်လေး ဖောက်ပြန်လာတာ. "ဟင်" ကျွန်တော်လည်းမရီရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ပွတ်လိုက်ရင်းခပ်တိုးတိုးလေးပဲပြန်ထူးလိုက်တယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.လမ်းလေးထောင့်လည်းရောက်ရော ကျွန်တော့လက်တစ်ဖက်ကို မရီရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက စောက်ဖုတ်လေးပေါ်လှမ်းစမ်းလိုက်တယ်. အဲဒီအတိုင်းလေးပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက် ပြွတ်ကနဲ လွှတ်လိုက်နဲ့ လေးငါးချက်လောက်ထိ ဆွဲပစ်လိုက်တယ်. မှတ်တိုင်ရောက်ပြီဆိုတော့ ဆင်းရပြီပေါ့.စိတ်ရိုင်းတွေနဲ့ အတူ အနမ်းတွေကလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းကို မရီရ့မျဲက်နှာအနှံ့ ချွေပစ်လိုက်တယ်.မရီကိုရှေ့ မှာဆိုတော့ သိမ်ကျဉ်တဲ့ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဘက်က တွန်းထားသလိုနဲ့ ထိမ်းထားပြီး တင်းကားနေတဲ့ သူ့ ဖင်ကြီးကို နောက်ကနေပြီး ကျိတ်ထောက်ပြီးလိုက်လာတာ.လက်ကလည်း Pdf-LA Page4. ပြောမယ့်သာပြောရတာ ကျွန်တော့ရင်တွေလည်းခုန်တာမှ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ပေါက်ထွက်တော့မလားအောက်မေ့ ရတယ်. ကျွန်တော်ကသိပ်ဆင်းချင်တော့တာ မဟုတ်ဘူး.မျက်နှာကတဆင့် မရီရဲ့ ထူအမ်းအမ်းနှုတ်ခမ်းလေးကို နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ ပြီး တချက်ချင်း ဆွနဲမ်းလိုက်တယ်. အ၀တ်တွေဆချွဲတ်ပြီးတော့သာဆွလဲိုက်ချင်တော့တယ်. ပြီးတော့မှမော့နေတဲ့မရီရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်ကို နှုတ်ခမ်း တွေနဲ့ ခပ်မြင်းမြင်းလေး ဆွဲနမ်းလိုက်တယ်.ဖင်လုံးအိအိကြီးတွေကို ဆုပ်ချေကိုင်လိုက်ပြီး မရီကိုယ်လုံးလေးကို ကျွန်တော့ရင်ခင်ွထဲ ဆွဲထည့်လိုက်တယ်.မရီကိုဦးစားပေး သဘောနဲ့ ရှေ့ ပို့ လိုက်တယ်. လမ်းပေါ်မှာလူတွေရှိပေမယ့် ခပ်ကျဲကျဲ ပါပဲ. "တော်ပြီကွာသူများတွေသိသွားဦးမယ်" ကံမကောင်းစွာနဲ့ ပဲ အဲဒီအချိန်မှာဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်ရောက်လာပြီလေ.လီးကြီးကလည်း တော်တော်လေးကို တောင်နေပြီ ဆိုတော့ မရီရ့ေဲစာက်ဖုတ်လေးကို ထမီအပေါ်ကတောင် သိသိသာသာကိုပွတ်သွားတယ်. မရီရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းထူလေးကို ကျွန်တော့ပါးစပ်ထဲ့ထိစုပ်သငွ်းပြီးမှပြန်လွတ်လိုက်တာ ပြွတ်ကနဲ တောင်မြည် သွားတယ်.တသက်လုံး မှန်းခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုရင်ချင်ထ့ထဲည့် အိအိစက်စက် ဖင်သားတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်တွယ်ပြီး စောက်ဖုတ် လေးကိုလီးကြီးနဲ့ခါးကိုယိမ်းယိမ်းပြီး ထမီအပေါ်ကပဲ လိုးပစ်လိုက်တော့တယ်. "တော်ပြီကွာ" မရီကတိုးတိုးလေးဆိုတယ်. "သွားရအောင်နော်" မရီရဲ့ အသံတွေက တာဝေးပြေးလာတဲ့ အပြေးသမားတစ်ယောက်လို မောဟိုက်တုန်ယင်နေတာ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်. ကားအောက်ရောက်တော့ တော်တော်လေးမှောင်နေပြီ. "ကိုရဲ တော်ပြီကွာ " "ခဏလေးပါမရီရယ်" ကျွန်တော်လည်း မရီကိုချော့လိုက်ရင်းပ သဲူ့ ဖင်လုံးကြီးကို ခပ်ရရဲပဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်လိုက်ပြီးတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားကို ယူလိုက်တယ်.
ပြေးထွက်သွားတဲ့ မရီနောက်ကျွန်တော်လည်း ပြေးလိုက်သွားရတော့တာပေါ့ . ညှစ်ရင်းနဲ့ မှ လက်ချောင်းတွေကို ဖင်းသားတွေကြား ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်. မရီလည်းကျွန်တော့ကို ဘက်ဆိုတွန်းပြီး ခပ်သုတ်သုတ်လေး ထွက်သွားတော့တာပဲ. တော်တော်လေးကိုနီးနေပြီ.မှောင်နေတဲ့ ဟာကို ကျွန်တော်လည်း မရီကိုအသာချော့ခေါ်နေရတယ်. "မရီအိမ်မပြန်နဲ့ ဦးလေကျွန်တော့အိမ် ခဏလိုက်ခ့ပဲါလား" နမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ခွာလိုက်ပြီး ကျွန်တော်မရီကိုတိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ်. အောက်ထပ်ကလင်းနေတယ်. မရီကို ကြည့်ရတာအိမ်ကို ပြန်မဲ့ပ.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www. ဒီလိုနဲ့ ပဲ အိမ်ရှေ့ရောက်လာပြီ. "အဟမ်းအဟမ်း" တော်တော်လေးကို လန့် သွားတာဗျာ လူကြီးတစ်ယောက်ဘယ်အချိန်လောက်က လာနေတာလည်းမသိဘူး. ကျွန်တော်လည်းခပ်တင်းတင်း မရီလက်ကို မလွှတ်ပေးဘူးလေ.မရီလည်း ခါးလေးကော့သွားနဲ့လက်တွေကိုဖင်တုန်ကြီးပေါ်ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးဖွံ့ ဖွံ့ထွားထွားဖင်လုံးကြီးတွေကို မုန့် နယ်သလို အားရပါးရကိုဆွေဲ ချလိုက်တယ်.ုံ သူ့ တို့ လမ်းဘက်ကိုခြေလှမ်းတွေက ဦးတည်နေတာ ဒါနဲ့မရီရဲ့ လက်ကိုဆြွဲ ပီး မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခေါ်လာရတော့တယ်.ဘရာကော အင်္ကျီကော ခံနေလို့ လာမသိ ခပ်ထွေးထွေးလေးပဲ ကိုင်မိတယ်.mmcybermedia. ဒီလိုနဲ့မရီတို့ လမ်းထိပ်ကို ရောက်လာတယ်.လီးကြီးကိုလည်း စောက်ဖုတ်လေးပေါ် ခပ်ပြင်းပြင်း မြန်မြန်လေးဆောင့် လျှာဖျားလေးနဲ့ သူ့ လျှာကိုဆွဲပွတ်လိုက်တယ်.ကျွန်တော်လည်း နောက်ကကပ်လိုက်သွားတာပေါ့. နို့် ကြီးကိုဆုပ်ချေပြီး နှုတ်ခမ်းကိုကြာကြာလေးတစ်ချက်ဆွဲစုပ်ထားလိုက်တာ မရီခါးလေး ကော့လာပြီး ကျွန်တော့ကိုပြန်ဆောင့်ပေးလာတယ်. မရီရဲ့ လျှာဖျားလေးကလည်း ကျွန်တော့လျှာကိုပြန်ဆော့လာတာနဲ့သူမရဲ့လျှာလေးကို ပါးစပ်ထဲ့ထိရောက်အောင်ကိုဆစွဲုပ်လိုက်တော့တယ်. "ဟင့်အင်းကွာ" မရီငြင်းငြင်းခြင်းပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကိုဆစွဲုပ်လိုက်ပြီး ဟသွားတဲ့နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားကို လျှာဖျားလေးထိုးထည့်လိုက်တယ်. မရီ ခါးလေးကော့ သွားတယ်.com မရီရဲ့ နို့ ထွားထွားကြီးကို အင်္ကျီပေါ်ကနေပြီးဆုပ်ချေပေးလိုက်တယ်.အခုတောင်ငါရှက်လိုက်တာ. မလုပ်နဲ့ ကွာ ယားတယ် ဖင်သားအိအိကြီးတွေကို ညှစ်ရင်းနဲ့ မှ ခဏနေဆို ဒီအိုးကြီးကို လိုးရတော့မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တင် အပေါ်ကိုမြန်မြန်လေး ရောက်ချင်နေပြီ ဆယ့်နှစ်ထစ်ပဲ ရှိတဲ့ လှေခါးထစ်ကလည်း ဒီနေမှ မကုန်နိုင်တော့သလိုပဲ Pdf-LA Page5. ကျွန်တော်လည်း နောက်ကနေပြီး ဖင်ကြီးကိုအားရပါးရ ကိုင်းညှစ်ပစ်လိုက်တယ်. မရီအိမ်ကိုလိုက်ခ့ေဲနာ် တော်ပြီကွာ .အောက်ထပ်က လူတွေအိပ်ပုံ မရသေးဘူး. ပါလာဖို့ က အရေးကြီးတယ်လေ. မရီကလှေကားပေါ် အရင်တတ်သွားတယ်. မလိုက်ဘူးဆိုကွာ မရီက ရုန်းရင်းနဲ့ငြင်းတယ်.မရီက အန်တီလေးက မကြာခဏ လိုက်လာနေကြ . ဟိုလူကြီး မြင်သွားသေးလားမသိဘူး မမြင်ပါဘူးမရီရ. ဒါပေမယ့် ပြသနာမရှိဘူး. လှေကားက နဲနမဲတ်တော့ မရီရဲ့ ဖင်ကြီးတွေက နောက်ကိုပစ်ထားသလိုကို ဖြစ်နေတာ.
လက်ဝါးပုံစံ ပြုပြီး နို့ ပေါ်မှ လှိမ့်လှိမ်ပေးပေးနေရာက လက်သည်းခွံလောက်ရှိတဲ့နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မ နဲ့ ခပ်ဖဖွေလး ဆွေဲပးလိုက်တယ်.ကျွန်တော့ရဲ့ ပုဆိုးကိုခါးက ဖြုတ်ချလိုက် တော့မှပဲ အသိဝင်လာသလို သူမရဲ့ နို့ လေးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြက်ချေခတ်ပုံစံ ဖုံးဖိနေတောတာပဲ. လျှာတွေပါ ကျွန်တော့ပါးစပ်ထဲ ထိုးသွင်းလာပြီး ကျွန်တော့လျှာကို ဆွဲစုပ်တော့တာပဲ. မရီက ကျွန်တော့ကို ကျောပေးပြီး ကုလားထိုင်တွေဘက်သွားနေတာ.မရီရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကလည်းကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်ပြီး စုပ်ယူလာတယ်. ပြီးတော့ဘရာ အနီရောင်လေး ပြီးတော့ထမီ. အထဲ ကဘရာစီရာကို အပေါ်ကို တွန်းပို့ပြီးမှပဲ နို့ နှစ်လုံးကို လက်ထဲ မှာခပ်ဖွဖွေလးဆော့ လိုက်တယ်.ကျွန်တော်လည်း တံတွေးတချက်မြိုချလိုက်ပြီး မရီရဲ့ ခါးသိမ်သိမ်လေး ကိုရင်ခင်ွထဲ ဆွထဲည့်လိုက်တယ်.ဒါပေမယ့် အခုလို မြင်ရတော့ သိပ် အထွားကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး.မရီရဲ့ လျှာပြားလေးကို နှုတ်ခမ်းတွေကို အတွင်းထဲ ထိအတင်း ဆွဲစုပ်လိုက်ပြီး ဖင်သားကြီးတွေကို လက်နဲ့ ဆုတ်ချေပြီး ဆွဲကပ်လိုက်တာ လီးကြီးက မရီရဲ့ အတွင်းခံလေးအပေါ်ကနေပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို အရှိန် Pdf-LA Page6.ပြီးတော့မှ ဒုတိယအကြိမ် မရီရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးအစုံကို ဆွဲစုပ်ယူလိုက်တယ်. ထမီအထက်ဆင်လေးကိုဆချွဲတ်လဲပြီးရော မရီရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အနီလေးပဲကျန်တော့တယ်.နို့ လေးတွေလို့ ကျွန်တော် သုံးနှုန်းလိုက်ရတာအကြောင်းရှိတယ်. အနားသတ်လေးတွေရဲ့ အောက်စီကမှ ပြူတစ်ပြူတစ် ထွက်ပေါ် နေတဲ့ဖြူဖြူဥဥ နို့ လေးတွေ ပေါ်မှာမှ အကြောစိမ်းလေးတွေ ယှက်သန်းနေတာ.လက်ဝါးတစ်အုပ်စာအရွယ်လောက်ပဲ ခပ်လုံးလုံးတင်းတင်းလေး. စောစောကမှ ငြိမ်မလို ဖြစ်သွားတ့ဲလီးကြီးကလည်း ဖင်ကိုထိမိတာနဲ့သားကောင်နဲ့ရတဲ့ မြွေတစ်ကောင်လို ချက်ချင်းကို ထောင်မတ်လာပြီး မရီရဲ့ ဖင်ကြီးကို အားရပါးရကိုထောက်နေတော့တယ်.မရီရဲ့ နို့ တွေက အ၀တ်ဝတ်ထားရင် ထွားတယ်ထင်ရတယ်. မရီနောက်ကို ကပ်လိုက်ပြီး နောက်ကနေပြီး သိုင်းဖက်လိုက်တယ်. ပြည့်ဖြိုးတဲ့ လက်မောင်းသားတွေနဲ့လက်ဖျံလေးတုတ်တုတ်လေး တွေက နို့ လေးတွေပေါ်ကနေပြီး ကြက်ခြေခတ်တစ်ခုလို အနားသတ်ထားသလို. ကျွန်တော့ရဲ့လက်တွေက ဇယ်ဆက်သလို လှုပ်ရှားသွားလိုက်တာ မရီတားချိန်တောင် မရလိုက်ဘူး. အိမ်ထဲဝင်ဝင်ပြီးချင်းပဲ တံခါးကို ချက်ထိုး မရီဘက်လှည့်လိုက်တယ်.com အိမ်တံခါးကို မြင်တော့မှပဲ စိတ်ချမ်းသာတော့တယ်. အား အ ကိုရဲ မရီရဲ့မျက်နှာလေး နောက်ဘက်ကို လည်လာတာနဲ့သူ့ ပါးပြင်ပေါ်ကို အနမ်းတွေ ပထမဆုံးခပ်ဖွဖွေလး ချွေလိုက်တယ်. နို့ ကိုလက်နဲ့ လည်းဆွလဲိုက်ကော မရီဆီက ညီးညူသံလေးတွေ ထွက်လာတယ်.မရီရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုဆွဲစုပ်လိုက်ပြီး နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကိုခပ်ဖွဖွေလး ချေလိုက်တော့ မရီရဲ့ ခါးလေးကော့ လာပြီး ဖင်ကြီးကို ကျွန်တော့ဆီပြန်ဆောင့်လာတယ်. ကျွန်တော်လည်း မရီ ထလာပြီဆိုတာ နဲ့သူမရဲ့ နှိပ်ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်လိုက်တော့တာပဲ. ခါးကိုဆွဲ ဖက်လိုက်ပြီး မရီရဲ့ဆံထုံးအောက်က ဂုတ်သားဖွေးဖွေးလေးကို နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆွဲ နမ်းလိုက်တယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www. အောက်ပိုင်းကို ရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပြီးမရီကို ထမီအပေါ်ကနေပြီး လိုးပေးနေရက လက်တွေကို ခါးပေါ်ကနေပြီး မရီရဲ့အင်္ကျီအောက်လျိုလိုက်ပြီး နို့ တွေပေါ်ပို့ လိုက်တယ်. ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်း ထူထူလေး.mmcybermedia.မရီလည်း ခါးလေးကော့ လာတာသူ့ ဖင်အိအိကြီးတွေက ကျွန်တော့လီးကြီးပေါ်ကို ရောက်လာတယ်.
ကျွန်တော့လီးကအရှည်ခြောက်လက်မလောက်တော့ရှိတယ် လုံးပတ်ကတော့ ကျပ်ပြားသာသာလောက်ပါပဲ.မရီကလည်း အလိုက်တသိပါပဲ သူမရဲ့ ဖင်ကြီးကိုကြွပြီး ကျွန်တော့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီးအ ပေါက် ၀လေးမှာ တေ Pdf-LA Page7. မရီထန်နေပြီဆိုတော့ ဖင်သားကြီးတွေကို အတွင်းခံပေါ်ကနေဆုပ်ချေ နေရာက အတွင်းခံအောက်ကို နှိုက်ပြီး ကိုင်လိုက်တယ်.ဖင်သားကြီးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးကို ကိုင်ပြီးနယ်ပစ်လိုက်တယ်.နို့ လေးတွေရဲ့ထိပ်လေးမှာတော့ အညိုဘက်သန်းတဲ့ နို့ သီးခေါင်းလေးတွေ.ကျွန်တော့လီးထိပ်ဖူးမှာလည်း အရည်ကြည်လေးတွေ ကပင့်ကူမျှင်လို တွလဲကျဲနေသေးတယ်..အမွှေးလေးတွေ က အကွေဲကြာင်းလေးတောက်လျှောက် မှာမဲနေတာပဲ. ပထမဆုံး နို့ သီးခေါင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဆွစဲို့ လိုက် ပြွတ်ကနဲ နေအောင်ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးလိုက်တယ် . အခုမှပဲ နို့ လေးတွေကို လွတ်လတ်ွလပ်လပ် ကြည့်ခငွ့်ရတော့တယ်..အင့်ကနဲ မရီဆီကနေ အသံထွက်လာပြီး ခါးလေးလည်းကော့သွားတယ်.ဖြူဝင်းတဲ့ နို့ လေးတွေပေါ်မှာ အကြောစိမ်းလေးတွေက ပင်ကူမျှင်တွေလို ယှက်သန်းနေတာ.mmcybermedia.ပေါက်ဆီပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဖုလေးလိုဖြစ်နေတာ.ပြီးတော့မှမရီရဲ့ရှေ့ မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး နောက်ဆုံးသောအတွင်းခံလေးကို ဆွချွဲတ်လိုက်တော့တယ်.ပြွတ်ကနဲ ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီဆို နို့လေးတွေက လက်ကလွှတ်လိုက်တဲ့ရေပူပေါင်းလေးလို တုန်တုန်သွားပြီး မရီရဲ့ ကော့ထားတဲ့ ခါးလေးလဲ ပြန်ကျကျသွားတယ်.မရီရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးက ဖောင်းဖောင်းလေး.မရီကလည်း ကျွန်တော့ခေါင်းကို လက်နဲ့ ဆွဲပြီးနို့ နဲ့ ဆကွဲ ပ်ထားတာ လွှတ်တောင်မလွှတ်တော့ဘူး. အတွင်းခံလေးကို ဒူးလောက်လဆွဲချလိုက်ကော ၀မ်းဗိုက်သားပြေပြေလေး အောက်ကဆီးခုံမို့ မို့ လေးပေါ်မှာထူထူထဲထဲ လိမ်တွန့် တွန် အမွှေးနက်နက်လေးတွေက သူမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ခြံရံထားသလို ကိုခန့်ခန့်ကြီးပေါ်လာတော့တာ စောက်ဖုတ်လေးရဲ့ အ၀မှာတော့အရည်ကြည်လေးတွေတောင် ရွေဲနပြီ.လက်နဲ့ ပွတ်လိုက်တာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အတွေ့ နဲ့အရည်ကြည်လေးတွေက လက်မှာ ကပ်ပါလာသေးတယ်.လက်တစ်ဖက်ကမရီရ့ဖဲင်သားကြီးတွေကို အတွင်းခံလေး အပေါ်က နေပြီးညှစ်လိုက် ပွတ်လိုက်လုပ်ပေးနေပြီး နောက်လက်ကနို့ သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုးလက်မ သုံးပြီး ခပ်ဖွဖွေလး ဖိပွတ်လုက်တယ်.နို့ လေးတွေက တင်းတင်းရင်းရင်းလေး ကိုင်ရတာ လက်ထမှဲာ ထွေးနေတာပဲ.နို့ ကိုင်တဲ့ လက်ကိုပါ ဖင်သားကြီးတွေ ပေါ်ပို့ ပြီး အားရပါးရကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုဆုပ်ချေပွတ်သပ်လိုက်တာ.ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ခြေဆင်းထိုင်လိုက်ပြီး မရီကိုလက်ကလေး ကဆွချဲလိုက်တယ်.နို့ သီးခေါင်းလေးကို ခပ်ဖွဖွေချလိုက် ဖိပြီးခပ်တင်းတင်းလေးချေလိုက် ပါးစပ်ကလည်း နို့ အုံလေးကို မလွှတ်တော့ပဲ တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် စို့ ပေးလိုက်တယ်. ထွေးထွေးအိအိ ဖင်သားကြီးရဲ့အသားခြင်းအထိအတွေ့ က ကျွန်တော့စိတ်ရိုင်းတွေကို ပိုပြီးမောင်းနှင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်...ပြီးတော့သူမရဲ့ ပေါင်တုတ်တုတ်ကြီးတွေကို ကျွန်တော့ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး ထိုင်ရက်အနေအထားလေးပြင်လိုက်တယ်.အ မရီဆီက ညီးညူသံလေးတွေထက်ွလာတာ ကျွန်တော့နားထဲမှာတော့ ဆည်းလဲသံလေးလို ကိုထင်သွားတာ.နို့ လေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စို့ လိုက်တိုင်းမရီဆီကလည်းညီးညူသံလေးတွေ ထွက်လာပြီး ကော့ကော့သွားတာ. ကျန်တဲ့ နို့ လေးတစ်လုံးကို တော့ ဆွစဲို့ လိုက်တယ်လေ.ကျွန်တော့လက်တွေကတော့ မရီရဲ့ လက်တွေကို ဆွဖဲယ်လိုက်တယ်..ကျွန်တော်လည်းထပ်မနူးနေတော့ဘူး. အား.com ခပ်ပြင်းပြင်း သွားဆောင့်မိတယ်. လက်တစ်ဖက်က နို့ လေးကို အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းတာရပ်ပြီး ခေါင်းကိုနည်းနည်းနှိမ့်ပြီး ကျန်တဲ့ နို့ လေးကို ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်း နှစ်လွှာနဲ့ဖိပြီးကြိတ်လိုက်တယ်.မရီရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လီးနဲ့လှမ်းကော်ထိုးလိုက်တယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.
မရီရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဆွဲ ပြီးခေါင်းကိုထပ်လှန်လိုက်တော့ ခါးလေးလည်းပိုကော့သွားပြီး နို့ လေးတွေလည်းချွန်တတ်လာတယ်. မရီကအပေါ်ကနေ ကျွန်တော့လက်မောင်းတွေကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်နေသလို ကျွန်တော်ကလည်းမရီရဲ့ ခါးလးကိုထိန်းပြီးအောက်ကနေပြန် ဆောင့်နဲ့တော်တော်လေးအတိုင်အဖောက်ညီလာတယ်. Pdf-LA Page 8 .mmcybermedia.com့ ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်.သူ့ မျက်နှာကတော့ ရှက်လို့ ထင်တယ် ရဲ နေတာပဲ.ကျွန်တော်လည်းမရီရဲ့ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေကို ပွတ်လိုက်ညစ်လိုက် ဖင်ကြီးကိုဆဆွဲ မွဲ ပြီး အောက်ကနေ ခပ်မြန်မြန်ပေဲဆာင့်ပေးလိုက်တယ်.မရီလည်း ဒီလိုအတွေ့ အကြုံ ရှိဖူးတယ်ထင်တယ်.မရီလည်း ခါးလေးကော့သွားပြီး ခေါင်းလေးနောက်ကို လန်သွားတယ်. မရီလည်းနောက်ဘက်ကိုခါးကော့သွားရာကနေပြီး ပြန်မက်လာတယ်. -အ-အ-အမရီဆီကနေ ညီးညူတဲ့ အသံတွေထက်ွလာပြီး သူ့ ရဲ့အခေါင်းထဲ့ က ကျွန်တော့လိင်တန်ထိပ်ကို ဆွညဲစ်သလိုခံစားလာတော့ ကျွန်တော်လည်းပြီး ချင်လာတာနဲ့ လက်တစ်ဖက်က မရီရဲ့ နို့ လေးကိုဆွဲ နောက်တစ်ဖက်က ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးကိုညစ်ပြီးအားရပါးရ ထပ်ဆွဲလိုက်တာ ဆယ်ချက်လောက်လဲ ပြီးရော သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်ကုန်ရော မရီလည်ပြီးသွားတယ်.ကျွန်တော့လီးတစ်ခုလုံး အပူငွေ့ လေးကဆီးကြို လိုက်သလို အသားမျှင်တွေရဲ့ ညှစ်ယူမှုကြောင့် နွေးသွားတာပဲ.ဆီးစပ်နှစ်ခုထိကပ်ပြီး အမွှေးတွေလည်းရောလျှက်သွားတယ်. စောက်ခေါင်းဝလေးကလည်း စိုစွတ်နေတော့ စွတ်ကနဲ တ၀က်လောက် ထိဝင်သွားတယ်.ဆံပင်တွေက မျက်နှာမှာကပိုကယိုလေး ပြေနေတာ. နှဖူးမှာလည်းချွေးလေးတွေသီးလို့.မရီရဲ့အဖုတ်လေးက အရည်လေးတွေရွဲလာတော် အသံတွေတောင်ထက်ွလာတယ်. ကျွန်တော်ရဲ့ လိင်တန်ကြီးလည်းသူမရ့ဲ အဖုတ်ထဲ ကိုထပ်ပြီ စွပ်ကနဲ့ ဝင်သွားပြန်တယ်.ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း သူ့ ဆီးစပ်နဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ် ကတဖက်ဖက်ကို ရိုက်ခတ်အသံတွေထက်ွနေတာ.အားလည်းပိုပါလာတယ်.မရီရဲ့ စောက်ခေါင်းကျွန်တော့ လိင်တန်ကြီးကိုညစ်ရင်းညစ်ရင်းနဲ့ မရီရဲ့ ကိုယ်လုံးလဲကျွန်တော့် ပေါ်ပြို ကျလာကော.လီးလည်းမရီရဲ့ ဖင်သားကြီးကို အိကနဲ့ သွားဆောင့်ပြီး အဆုံးထိ ၀င်သွားတယ်. -ကိုရဲ နင့်ဟာကြီးကလည်းအရွယ်နဲ့ တောင်မလိုက်ဘူး ကြီးလိုက်တာမရီကခပ်တိုးတိုးလေးကျွန်တော့နားနား ကပ်ပြောတယ်. ပြီးတော့ထိုင်ရက် အနေအထားနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ကအောက်က သူကအပေါ်က ခပ်ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပေါ်ကမရီရ့ဲ လှုပ်ရှားမှုတွေက ပိုပြီးမြန်လာတယ်.အပျိုစင်အမှေးတွေဘာတွေတော့မသိလိုက်ရဘူး.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.ဲ မရီလည်း မျက်နှာလေးမဲပြီး ညီးညူသံတွေ ထွက်လာတယ်.မရီပြောသလို ကျွန်တော်ငပဲ ကပဲတော်တော်လေးကြီးတယ်ထင်တယ် မရီရဲ့ အဖုတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကို ပြည့် သိပ် ကျပ်နေတာ. ကျွန်တော်လည်းမရီရဲ့ ပုခုံးလေးကိုဖိပြီး အောက်ကနေဖင်ကို ပင့်တင်ကော်ချလိုက်တယ်. ကျွန်တော်လည်း လီးကိုမထုတ်သေးဘဲ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ခါးကိုခပ်တင်းတင်းလေးဆွဲဖက် ဆီးစပ်ကိုဆွဲကပ်လိုက်ပြီး လီးကိုစောက်ခေါင်းထဲ မွှေပေးလိုက်နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး စုပ်ယူလိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်. ဗြစ် အားအ ရုတ်တရတ်ဆောင့်လိုက်တာဆိုတော့တော်တော် လေးအရှိန်ပြင်းသွားပုံပ.
မရီရဲ့ အခေါင်းထဲမှာကျွန်တာ့လိင်တန်ကြီး အထာကျသွားအောင် ထပ်မလုပ်သေးဘဲ လိင်တန်ကို မွှေပြစ်လိုက်တယ်. ဒါနဲ့ မရီကိုကျွန်တော့ပေါ်က ဖယ်လိုက်တယ်.မရီရဲ့ လျှာလေးကိုဆွဲယူလိုက်ရင်းက ခါးကိုဖိပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးတစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တယ်. Pdf-LA Page9. -နောက်တစ်ခေါက်လောက်လေ နော် မရီ------တော်ပြီကွာ------လုပ်ပါမရီကလည်း နောက်တခေါက်တည်းပါ--မရီကငြင်းပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတော့မျက်နှာအိုအိုလေးနဲ့ ခေါင်းညိမ့်ပေးပါတယ်.လိင်တန်ကြီးကို တစ်ထစ်ခြင်းဖိသငွ်း လိုက်ရင်း ထမ်းထားတဲ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖိလိုက်ရင်းမရီရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူအမ်းအမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်ယူလိုက်တယ်.ကျွန်တော်လည်း မရီကိုပက်လက်လှန်ပြီးတော့ တုတ်တုတ်ခခဲေဲပါင်ကြီးတွေကို ဆွေဲထာင်ပြီး ပေါင်ကြားမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်.မရီရဲ့ အခေါင်းထဲကို ချောချော မွေ့ မွေ့ က၀ို င်သွားလိုက်တာ -ဖြွတ-် -ဖွတ-် -အားအရည်တွေစိုနေတော့ လိင်တန်ကြီးရဲ့ တ၀က်လောက်ကပြန်ဝင်သွားတဲ့အသံကော မရီရဲ့ ညီးသံပါတပြိုင်တည်းလိုလို ထွက်လာတယ်. --အင်း---ဟင်း---သေပါပြီ ကိုရဲ ရဲ့ --မရီရဲ့ အတွင်းသားတွေကို မွှေပြီးထိပတ်ွသွားတာဆိုတော့ မရီဆီက ငြီးသံလေးတွေထွက်လာပြီးလက်နှစ်ကြမ်းပြင်ကို အကြောင်းမဲ့ကုတ်ခြစ်လာတယ်.ကျွန်တော်လည်းအချိန်သိပ်ဆမွဲ နေတော့ဘူး ပေါက်ကွဲလုလု တင်းတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို မရီရဲ့ အခေါင်းဝကို တေ့ပြီး သွင်းလိုက်တယ်. ထောင်ထားတဲ့မရီရဲ့ခြေသလုံးတွေကို ပုခုံးတွေပေါ်ထမ်းလိုက်တော့ မရီရဲ့ ဖင်ဖြူဖြူကြီး ကြမ်းပြင်ကကြွလာသလို အဖုတ်ကြီးလည်း ဖောင်းပြီးခုန်းတတ် လာတယ်.com ကျွန်တော့နောက်ကိုပက်လက်လှန်ချလိုက်တော့ မရီကိုယ်လုံးပါကျွန်တော့ပေါ်ပါလာတယ်လေ.mmcybermedia. -အား အ ကိုရဲ ကွာတော်တော်ဆိုးတာပဲ----တော်ပြီ--မရီကကျွန်တော့ရင်ဘက်ကို လက်နဲ့ တားသလိုထောက်ရင် ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောတယ်.ကျွန်တော်လည်း မရီထလို့မရ အောင်သူ့ တင်ပါးဆုံကြီးကို လက်နဲ့ဆဖွဲိလိုက်တယ်.ကျွန်တော့လိင်တန်ကလည်း တချီပြီးသွားတာတောင် မကျသေးဘူး.ပထမတစ်ကြိမ်ဆြွဲ ပီးသွားပြီဆိုပေမယ့် မရီရဲ့ အဖုတ်လေးက ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း ဖြစ်နေတုန်းပဲ.မရီရဲ့ အခေါင်းထဲက ကျွန်တော့ရဲ့ လိင်တန်ကြီး ဆွဲပြီးညစ်လိုက်သလို တင်းကနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်.မရီကျွန်တော့ပေါ်က ထသွားကော လိင်တန်ကြီးကလည်း အခေါင်းထဲ ကနေပြီ ဗွက်ကနဲ အသံ ပေးပြီးထွက်လာတယ်. --ဖြွတ-် --ဖွတ-် -အူး--အီးရှီး မရီဆီကငြီးသံနဲ့ အတူလိင်တန်ကြီးလည်းမရီရဲ့ အခေါင်းထဲကို အဆုံးထိဝင်သွားတယ်.လိင်တန်ကိုတော့သူအခေါင်းထဲကမထုတ်သေးဘဲ မရီရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပတ်ွသပ်ပေးနေလိုက်တယ်.ခဏနေလောက်တော့ မရီခေါင်းလေးထောင်လာပြီးထဖို့ လုပ်တယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.
လူကကရင်မဆိုတော့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တစ်တုံးတစ်ခြဲ ကီး.အိပ်ရာကချက်ချင်းမထသေးဘဲ ပြီးခဲ့ တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်တွေးမိသေးတယ်.ဒေါ်ကရင်မနာမည်ကို တော့သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး.သြော် ဒေါ်ကရင်မကိုး.လူမရှိရင် ၀င်လျှော် ဖို့ ဆိုပြီး သူ့ ကိုအိမ်သေါ့ တစ်ချောင်းအပိုပေးထားတာလေ.com မရီစိတ်ထနေပြီလို့ သတိထားမိတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပေါင်ဖြူဖြူကြီးကို ထိန်းကိုင်လိုက်ပြီး အသွင်းအထုတ်ကို ပြန်စလုပ်လိုက်တယ်.လိင်တန်ကြီးလည်းကြင်တတ်လာပြီး နောက်ထပ်ဆယ် ချက်လောက်ဆောင့်ပြီးတော့မရီရဲ့ အထဲ ကို ပဲအရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်တယ်.ကျွန်တော်က သူ့ ကိုဒေါ်ကရင်မပဲခေါ်တာလေ.ဖင်ကြီးတွေကို ကြွပြီး အ၀တ်တွေကို ဆောင့်လျှော် လိုက်တိုင်း ဖင်သားကြီးတွေက တုန်ကနဲ့ ပါသွားပြီး ပြန်ကျလာပျြီဆိုရင်း သူမရဲ့ ခြေသလုံးတွေပေါ်ကို အိအိကြီးကို ပြန်ဖိကပ်သွားတာ.အန်တီလေးများ ရုံးမသွားဘူးလားတွေးရင်း အိမ်ထဲ ကိဝုင်လာခဲ့ တော့ ရေချိုးခန်းဘက်က အ၀တ်လျှော်သံတွေ ကြားလိုက်ရတယ်.တင်ပါးလုံးကြီးတွေကနည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး ပြီးတော့ ထမီစက တင် ပါးကြီးတွေကြားထဲ အသားဆိင်ုတွေထမှဲာ ညပ်နေတာဆိုတော့ ဖင်ကြီးတွေကိုတစ်လုံးခြင်းကိုမြင်နေရတာ.တဖြည်းဖြည်းနဲ့အ၀င်အထွက်တွေကလည်းပိုပြီးချောမွေ့ လာတယ်.အိမ်ရောက်တော့တံခါးက သော့ပငွ့် နေတယ်. ဒါနဲ့ နောက်ဘက်ကိုသွားရင်း ရေချိုးခန်းတံခါးနည်းနည်း ဟနေတာနဲ့ အထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်.ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ ဒီနေ့ကကျောင်းမသွားဘူးလေ.ဘယ်သူကိုမှပြန်မပြောပါနဲ့တ.ဒေါ်ကရင်မက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး လျှော် နေတာဆိုတော့ သူမရဲ့ တင်းပါးလုံးကြီးတွေကို အရှိအတိုင်းဖေါ်ပြသလိုကိုဖြစ်နေတာ. နောက်တစ်နေ့အိပ်ရာထတော့ လူတောင်နည်းနည်းနုံးနေသလိုပဲ. မရီကတော့ပြောသွားသေးတယ်.ဒေါ်ကရင်မက ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ အ၀တ်လျှော်နေကျ.ဲ့ တစ်ခါစားဖူးတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ထပ်စားချင်ဖြစ်နေရတာပေါ့လေ.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.ပြီးတော့လည်း ဒေါ်ကရင်မရဲ့ ထမီမှာ ရေတွေကစိုနေပြီး အသားမှာကပ်နေပြီ.ဒေါ်ကရင်မက အသက်သုံးဆယ့်ငါးလောက်တော့ရှိပြီ.သူ့ ဆီကကောကိုယ့်ဆီကပါအရည်တွေ ထွက်နေတာဆိုတော့အသံတွေကလည်းတော်တော်လေး ကျယ်လာတယ်.အဲ့ဒီဖင်တုန်တုန်ကြီးကို Pdf-LA Page 10 . ---ဖွတ-် --ပြွတ-် -အူး--အင်း--အား မရီရဲ့ ညီးညူသံလေးတွေကကျွန်တော့စိတ်ကို ပင့်ပေးနေသလိုပ.အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မရှိလည်း အိမ်ကို အ၀တ်ဝင်လျှော်နေကျ.ဆောင်ချက်တွေကလည်း အားပိုပါလာတယ်. --အီး--အား---အား---ပြွတ-် -ဖွတ်ဖတွ-် --ကျွန်တော်လည်းဆောင့်နေရင်းနဲ့ မရီရဲ့ ပေါင်လုံးကြီးတွေကိပုခုံးပေါ်ကနေချပြီး ဆောင့်လိုက်တိုင်ခုန်ခုတ်ထွက်နေတဲ့ နို့ ကြီးတွေကို ကိုင်ပြီး အားရပါးရ ကို ဆောင့်ပြီးလိုက်တယ်.သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မနက်ပိုင်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ တယ်.ကျွန်တော်လည်းလှည့် ထွက်မယ်လုပ်ပြီးမှ တစ်ခုခုကကျွန်တော့ကိုတိုက်တွန်းသလို ပြန်ကြည့်မိတယ်.mmcybermedia.ဲ တစ်သက်လုံးကမှန်းလာတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရ ဆော်နေရတာဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးအရှိန်တတ်လာတယ်.
mmcybermedia. ---ကိုရဲ ဘယ်တုန်းကပြန်ရောက်တာလဲ ---လျှော်စရာရှိမလားလို့ ကြည့်နေတာ-----အသံတုန်တုန်နဲ့ ပြောနေတဲ့ ဒေါ်ကရင်မရဲ့ စကားတွေကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး.com ဆောင့်ချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းပြီး ထွက်လာခဲ့ ရတယ်. ကျွန်တော်လည်းငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူး -------အဟမ်း-----အဟမ်း ချောင်းဟန့်သံပေးပြီး အခန်းထဲ ကိဝုင်လိုက်ရတော့တယ်.တင်ပါးကြီးကိုလက်နဲ့ညှစ်ချေလိုက်ရင်း ဆီးစပ်ချင်းလည်းကျိတ်ပတ်ွလိုက်တယ်.ရေကလည်းစိုနေတာ ဆိုတော့ ထမီတိုတိုအောက်က ခြေသလုံးတုတ်တုတ် ကြီးတွေ ပြီးတော့ရေစိုထမီအောက်က တုတ်တုတ်ခခဲ ပေါင်တံကြီးတွေ ဖုထစ်ပြီးကားထွက်နေတဲ့ လုံးလုံးခဲခဲတင်သားထွားထွားကြီးတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ညီတော် မောင်က ထပ်ထလာတယ်.ဒေါ်ကရင်မရဲ့ ရင်အစုံကိုတွေ့ တော့ စောစောကပြောပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော့စိတ်ကူးတွေပြောင်းပြီး နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်.ခပ်တည်တည်မျက်နှာနဲ့ ပဲ.အောက်ကညီတော်မောင်ကလည်းတော်တော်လေး ကိုခေါင်းထောင်နေပြီလေ.စောစောကဖြတ်သွားတုံးကတောင်ပိတ်ရတ်သားပါ.ကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲ ကိုလှမ်းချောင်းလိုက်တော့ အားပါးပါး ဒေါ်ကရင်မပါလား သူကကျွန်တော့ကိုကျောပေးထားတာဆိုတော့ မမြင်ဘူး အန်တီလေးရဲ့ဗီရိုရှေ့ မှာ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ အလုပ်တွေရှု ပ်နေတယ်.အဲဒါကြီးတွေကိုသာကိုင်လိုက်ရရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရင်တောင်မောတယ်.ကြည့်နေရင်းမှာပဲ ဒေါ်ကရင်မကအန်တီလေးဗီရိုထဲက ပ်ိုက်ဆံ တချို့ ထုတ်ယူလိုက်ပြီး နည်းနည်းရေကြည့် တချို့ ကို ပြန်ထည့်လိုက်တယ်. ---နောက်ကဘာလဲ ကျွန်တော့ကိုပြ---ဒေါ်ကရင်မနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး လက်ကို သူမရဲ့ နောက်ဘက်ကိုလှန်းလိုက်ရင်းတောင်းလိုက်တယ်.ပုဆိုးအောက်မှာဘာမှမပါတော့ Pdf-LA Page 11 .ရေစိုနေတဲ့ ခပ်နွမ်းနွမ်းဘလောက်အိင်္ကျီအောက်ကနေပြီး ထွားကြိုင်းလှတဲ့ ရင်သားကြီးတွေက ရုန်းထွက်တော့မလိုကိုခုန်းထနေတာ.ဒေါ်ကရင်မလည်းပိုက်ဆံကို ပိုက်ဆံကိုလက်နဲ့ နောက်ပို့ ပြီး ကျွန်တော့ဘက်ကို ၀ုန်းဆိုလှည့်လာတယ်. အခန်းထဲရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်လြှဲ ပီး ဒေါ်ကရင်မကြီးကိုပြန်တွေးနေမိတယ်.တင်ပါးကြီးတွေကနည်းနည်းနောနောမဟုတ်ဘူး တော်တော်လေးကိုထွားတာဗျ.နည်းနည်းနောနောကြီးမဟုတ်ဘူးလေ.ဒါဆိုကျွန်တော့အကွက်ထေဲရာက်ပြီပေါ့.အသက်ရူသံတွေတောင်ပြင်းလာပြီး ရင်အစုံကဖားဖိုတစ်ခုလို မြင့်လိုက်နိမ့်လိုက်နဲ့ . ---ကိုရဲ့ ရယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး----ကျွန်တော်လည်း နောက်ကလက်ကိုလှမ်းဆွသဲလိုနဲ့ဒေါ်ကရင်မရဲ့တင်ပါးထွားထွားကြီးတွေပေါ်လက်ကိုတင်လိုက်တယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့. -----ဒေါ်ကရင်မလက်က ဘာဖွက်နေတာလဲ--------ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ကိုရဲ ရယ် လျှော်စရာရှိမလားပဲလာကြည့်တာပါ--ဒေါ်ကရင်မရဲ့ အသံတွေက ငိုတော့မလိုကိုတုန်တုန်ရီရီတွေဖြစ်လာတယ်. လက်ကိုလုသလိုနဲ့တင်ပါးကိုကိုကိုင်ပြီး ကျွန်တော့ဘက်ဆွဲကပ်လိုက်တယ်. တွေးရင်း မနေနိုင်တော့ဘူး ပုဆိုးကိုလှန်ပြီး ဂွင်းထုလိုက်တာ သုံးလေးချက်လောက်ပရှဲိသေးတယ် အန်တီလေးအခန်း ဆီကတစ်ခုခုကျကွသဲံလို့ ကြားလိုက်ရတယ်. ကုန်းနေတာဆိုတော့ တင်ပါးစွင့်စငွ့်ကားကားကြီး တွေက နောက်ကို ဖုထစ်ပြီးကားထွက်နေတာ. အန်တီလေးအခန်းနားလဲရောက်ကော တံခါးကပွင့်နေတယ်. တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့မျက်နှာလည်းပျက်လို့ .
ဒေါ်ကရင်မရဲ့ တင်းပါးတုန်တုန်ကြီးတွေကို ပွတ်သပ်နေရာက ရေစိုထမီကို လက်နဲ့ ပင့်တင်လာတာခါးလောက်ရောက်နေပြီ.အဲ့ ဒီအချိန်မှာပဲ.အန်တီလေးရဲ့  စားပွဲတင်နာရီက နှိုးစက်ကထမြည်တာလေ.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www. ခုတင်ပေါ်က ကုန်းရုန်းပြီး ထလာတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးလည်း ရှက်နေတယ်နဲ့ တူပါတယ် ကျွန် တော့ကိုမကြည့်ဘူး မျက်နှာကိုလွှဲထားတယ် ကျွန်တော်လည်း အလန့် ပြေသွားတော့ ဆက်လှုပ်ရှား တယ်ပေါ့. ---ကလင်းးလင်းး---ကလင်းးးလင်းးး ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ တော်တော်လေးတောင် လန့် သွားတယ်.mmcybermedia.com ကျွန်တော့လိင်တန်ကြီးကဒေါ်ကရင်မရဲ့အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းမို့ မို့ ကြီးကို တိုက်ရိုက်ကြီးကို ထိတွေ့ ပွတ်သပ်မိနေတာ.တင်ပါးကြီးတွေက ကြီးပြီးတုန်နေပေမယ့် ကိုင်ရတာတင်းနေတာပဲ ပျော့ပြီးလျော့မနေဘူး.ကျွန်တော့လက်နှစ်ဘက်ကလည်း သူမရဲ့ တင်ပါးထွားထွားကြီးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုမွှေလိုက်ပတ်ွလိုက်နဲ့ ဒီကြားထဲ ရှေ့ကလည်း ပေါင်ကြားထဲက အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို ညီတော်မောင်နဲ့ အစွမ်းကုန်ညောင့်နေပြီလေ. --အား----အားအ---အင်-့ -အင်-့ --အိး လက်ရဲ့ အသွင်းအထုပ်ခပ်မြန်မြန်နဲ့ အတူ ဒေါ်ကရင်မလည်းအသံပေါင်းစုံထွက်လာပြီး သူ့ ပေါင်ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးတွေကို ကားပြီးကွပေးလာတယ်လေ.ဒေါ်ကရင်မလည်း ပိုက်ဆံလုတယ်ထင်ပြီး ရုန်းကန် နေရာက အထိအတွေ့ တွေ ကို သတိထားမိလာတယ်.မို့ ဖောင်းနေတဲ့ ခပ်နွေးနွေးနှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အမွှေးရိုင်းတွေ ရဲ့ အထိအတွေ့ ကကျွန်တော့ကိုအသက်ရူမှားသွားစေခဲ့ တာ.ကျွန်တော့ရဲ့ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ် ပစ်လိုက်ရင်း ဒေါ်ကရင်မရဲ့အ၀တ်မရှိတော့တဲ့ ပေါင်းခွကြားကို လက်နဲ့ ခပ်ဖွဖွေလး အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်.အခုထက်ထိမှတ်မိနေတုန်းပဲ. ---အား---အင်းး----ရှီးး----တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ပွတ်ပေးပြီးတော့လက်ခလည်ကို စိုစွတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အခေါင်းတွင်းကို ထိုးသွင်းပေးပြီးမွှေလိုက်တယ်.အောက်ပိုင်းဗလာဖြစ်သွားတဲ့ ဒေါ်ကရင်မရဲ့ ခြေသလုံးတုတ်တုတ် ကြီးတွေကို ဒူးကနေမပြီးသူမရဲ့ ရင်ဘက်ဆီ Pdf-LA Page 12 .ကျွန်တော်ကပြန်ဖိလိုက်တော့ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လေး ပြန်ဖြစ်သွားတယ်.အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို အုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း လက်ခလည် ကို အရည်ကြည်တွေနဲ့ စိုစတ်ွနေတဲ့အဖုတ်နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကြားထဲထည့်ပြီး ပွတ်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ ဒေါ်ကရင်မဆီကအသံလေးတွေထွက်လာတယ်.ကျွန်တော်ကပိုက်ဆံကို တကယ်လုနေတာမှမဟုတ်တာ.အိထွေးနေတာပဲ.လက်ကိုနှစ်ဘက်လုံးဒေါ်ကရင်မရဲ့တင်ပါးအိအိတုန်တုန်ကြီးတွေကိုတင် လိုက်ပြီး အားပါးတရကို ကိုင်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်. ဒေါ်ကရင်မရဲ့ တကိုယ်လုံးက တကယ့်ကိုတစ်ပွေ့ တပိုက်ကြီးဗျာ. ကျွန်တော်လည်း အောက်ပိုင်းအ၀တ်ဗလာဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ကရင်မကိုလက်နဲ့ အားရပါးရမွှေပြီးမှ အန်တီလေးရဲ့ ကုတင်ပေါ်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်ကိုယ်တပိုင်နင်တပိုင်း ကျပုံစံနဲ့ အနေအထားပြင်လိုက်တယ်.ဒေါ်ကရင်မနဲ့ ကျွန်တော်ကရင်ချင်းအပ်နေပြီ.ခါးပေါ်ကိုလိပ်တင်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်ကရင်မရဲ့ ထမီကိုဆွချွဲတ် လိုက်တယ်.ဒေါ်ကရင်မလည်း လန့် သွားတယ်နဲ့ တူတယ်.ဒေါ်ကရင်မကိုခပ်တင်းတင်းဆွဲဖက်ထားတော့ကြီးမားအိထွေတဲ့ နို့ ကြီးတွေက ကျွန်တော့ရင်ခင်ွကို အိအိကြီး ကိုလာဖိမိနေတာလေ.ပြီးတော့မှအသွင်းအထုတ်ခပ်မြန်မြန်လေး လည်းလုပ်ရော ဒေါ်ကရင်မ ကျွန်တော့လက်မှာတင်ကော့ပြန်လန်သွားတယ်.
----အားအ--အားအ--အီး---အား--ရှီးရှီး----အား--အင့်အင့်အင့် ဒေါ်ကရင်မကြီးက ငြီသံလေးတွေပေးနေပေမယ့် အောက်ကနေသူမရဲ့ ဖင်တုန်ကြီးကြီးကို စကောဝိုင်းသလို ပြန်ပင့်ပြီးကော့ပေးတယ်.ဘော်လီချိတ်တောင် ဖြုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ပေါင်ကြား ကုတင်စောင်းမှာ မက်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး လိင်တန်ကြီးကို အဖုတ၀်မှာတေ့ပြီး ဆောင့်သငွ်းလိုက်တယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.ဒေါ်ကရင်မလည်း အရှက်ပြေသွားပြီးနဲ့တူတယ် အိင်္ကျီချွတ်လို့ ရအောင် ကိုယ်ကိုပြင်ပေးတယ်.အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကို ကျွန်တော့လိင်တန်ကြီး ကဒေါ်ကရင်မရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးတွေကို ထိုးပြီးခွဝဲင်သွားတာ.com တွန်းတင်လိုက်တော့ ကုတင်စောင်းကနေ ဖင်ကြီး ကကြွသွားပြီး အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးလည်း ပိုပြီးဖောင်းလာတယ်.အမွှေးနက်နက်ရိုင်းရိုင်းတွေ ခြံရံထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းသား ထူထူကြီးတွေ လေမှုတ်သငွ်းထားသလို ကိုဖောင်းလို့ အလယ်မှာတော့ အရည်ကြည်လေးတွေစိုလို့ . ---အား---အ--ကိုရ-ဲ ---အီး---ရှီး----အူး ကျွန်တော်လည်း ဒါနဲ့ လျှာစောင်းချွန်ချွန်နဲ့အဖုတ၀်ကို အသွင်းအထုတ်လေးလုပ်ပေးလိုက်တာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဒေါ်ကရင်မကြီး တကိုယ်လုံးတောင့်တင်းသွားပြီး ငြိမ်ကျသွား တယ်.သူကကော့ကျွန်တော်ကဆောင့်နဲ့ အချက်ကျ ကျ ဆောင့်နေရင်းကနေ ကျွန်တော်အားမရတော့ဘူး ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ နို့ ထွားထွားကြီးတွေကို ဆွဲပြီး အားကုန်ဆောင့် ပေးလိုက်တယ်.mmcybermedia.ဒါနဲ့ ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်ကို လှချဲလိုက်ပြီး နို့ ထွားထွားကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း Pdf-LA Page 13 .ကျွန်တော်လည်း ဒူးထောင်ပေါင်ကား ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်ကရင်မရဲ့ ပေါင်ကြားထဲမှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တော့ သူအဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားတယ်လေ.ပေါင်တုတ်တုတ်ခခြဲ ကီးတွေကို ဖက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ဆယ်ချက်လောက်ထိ ဆက်တိုက်ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ်.ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေးမာန်ထနေပြီဖြစ်တဲ့ ညီလေးကို အလှည့်ပေးရတော့မယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီး ဆီကနေ အင့်ကနဲ အသံတချက်ထက်ွလာပြီး ခါးကြီးတစ်ချက် ကော့သွားတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီး တစ်ခေါက်ပြီးသွားတော့မှ ကျွန်တော်လည်းမက်တပ် ပြန်ရပ်လိုက်ပြီး သူမကိုယ်ပေါ်က အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တယ်.အရည်တွေနဲ့ အတူ ဗျိကနဲ့ အဆုံး ထိဝင်သွားတယ်.ဟုတ်ပြီကွ ကျွန်တော်လည်း သူအခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့အကွေဲကြာင်းလေးကို လျှာစောင်းနဲ့ ပင့်ပင့်ပြီး ကလိလိုက်တာ ဒေါ်ကရင်မကြီးဆီက အသံ တွေ ထွက်လာပြီးတော့ သူရဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်ကို သူ့ ဘာသာဆွဲထိန်းရင်း ခါးကြီးကိုပါကော့ကော့ ပေးလာပါကောလား.ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးနားဝရှိတဲ့ဘာဂျာ ကိုစမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့ဒေါ်ကရင်မရဲ့ ပေါင်တုတ်တုတ် ကြီးတွေကို အောက်ကနေတွန်းတင်ပြီး အကွေဲကြာင်းလေးကို လျှာနဲ့ တစ်ချက်ပင့်လျှက်လိုက်တယ်.ဒစ်ထိပ်ဖျားထိလောက် ဆွဲထုပ်ပြီး အားကုန်ပြန်ဆောင့်ထည့်တာဆိုတော့ ဒေါ်ကရင်မကြီးလည်းမခံနိုင် တော့ဘူး -----အားအားအား----အားအားအား သေပါပြီ ကိုရရဲ --အူးအား--၀ုဝု ဒေါ်ကရင်မကြီး အဆုံးထိအောင်တောင်မအော်လိုက်ရဘူး သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆွဲစုပ်နမ်းလိုက်ပြီး အဖုတ်ကြီးကိုဆက်ဆောင့်လိုက်တာ ဆယ်ချက်လောက်လဲကျကော အရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်ကော.ဒေါ်ကရင်မကြီးကကလေးနှစ်ယောက်အမေသာဆိုတယ်အခေါင်းဝကတော်တော် လေးကြဉ်းနေတယ် ဒီလောက်အရည်တွေထက်ွထားတာတောင်မှ ကြပ်နေတာပဲ ကျွန်တော်လည်းပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကို ဖြဲပြီးထပ်ဖိသငွ်းလိုက်တယ်.ဘော်လီနဲ့ ထိန်းထားတာတောင် နို့ ကြီးတွေကထွားနေတာ ဘော်လီလည်း ဖယ်လိုက်ကော တုန်တုန်အိအိနဲ့ရုန်းကန်ပြီးထွက်လာကော.
လိင်တန်ကြီးက တရှိန်တိုးပဲ အဖုတ်နှုတ်ခမ်း သားထူထူကြီးတွေကို ထိုးခွသွဲားပြီး ထပ်ဝင်သွားတယ်. ---အိုး---အီး--အင်း--အင်း---အင်းး Pdf-LA Page 14 .mmcybermedia.ဒါပေမယ့် အခေါင်းဝကတော်တော်လေးကို ကြပ်တာဗျ.ခါးကြီးကို ဆြွဲ ပီးဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့ဆီးစပ်က ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့  ဖင်သားလုံးလုံးအိအိကြီးတွေကို နောက်ကနေပြီး အရှိန်နဲ့ အိကနဲအိကနဲသွားဆောင့်မိတာကို က တော်တော်လေးကောင်းလာတာ.ဒေါ်ကရင်မကြီးက ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် ဖွံ့ ဖွံ့ ထွားထွားကြီးဆိုတော့ ကုန်းလိုက်တာနဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ပုံ့ ပုံ့ ကြီး ဖင်ကြီးနှစ်လုံးဆိုရင် နောက်ကိုကောက်ထွက်နေတာ တတုံးတခဲကြီးပေါ့.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.ကျွန်တော်ကဆောင့် ဒေါ်ကရင်မကြီးကကော့ စည်းချက်တွေကကိုက်လာပြီး တဖြည်းဖြည်း ဆောင့်ချက်တွေကမြန်လာတယ်.လက်တွေကလည်း ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ခါးကနေပြီး ဖင်သားထွားထွားကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်လိုက် နို့ အုံထွားထွားကြီးတွေကို လှမ်းဆွဲလိုက်နဲ့အအားကိုမရဘူး. ---ဒေါ်ကရင်မကြီး ကုန်းပေးပါလား----ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်တော့ ဒေါ်ကရင်မကြီးခင်မျာ ဘာမှတောင်ပြန်မပြောဘူး ကုတင်ခေါင်းရင်းကို လက်လေးထောက်ပြီး ကုန်းပေးရှာပါတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ အဖုတ်ထူအိအိကြီးလည်း အရည်တွေနဲ့စိုရွဲပြီးပြောင်နေတာပဲ.အရည်တွေလည်း စိုရွေဲ နတာဆိုတော့ ခပ်ကြပ်ကြပ်နဲ့ ပဲ အဆုံးထိ ၀င်သွားတယ်.ကျွန်တော့ရဲ့ ရင်ခင်ွထဲကို သူ့ ခေါင်းနဲ့ တိုးဝင်လာပြီး လက်တွေက ကျွန်တော့ကိုယ်လုံးကို ခပ်တင်းတင်းလေး သိုင်းဖက်လာတယ်. --ဖွတ်--ဖွတ-် ဗြွတ-် ---အူး---အား--ရှီး----အား---အအ ဒေါ်ကရင်မကြီးဆီက ငြီးညူသံထွက်လာတယ်. ----ကိုရရဲယ် နင့်အန်တီလေးသိရင် ငါ့ကို သက်တော့မှာပဲ ---------အန်တီလေး မသိနိုင်ပါဘူး ဒေါ်ကရင်မကလည်း------ကျွန်တော်တော့ ဒေါ်ကရင်မကြီးကို တော်တော်လေးကြိုက်သွားပြီဗျာ------ဒေါ်ကရင်မကော ကောင်းရဲ့ လား--------ဟဲကောင်လေး ဘာတွေပြောနေတာလဲ ---နားရှက်စရာတွေ---ဒေါ်ကရင်မကြီးက ရှက်သွားသေးတယ်.ကျွန်တော် လည်း ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ခါးကိုပြန်ဖက်လိုက်ပြီး ဖင်လုံးသားအိအိကြီးတွေကို လက်နဲ့ ချေပြီး ကိုင်လိုက်တယ်.ကျွန်တော်လည်းဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ခါးကနေဆြွဲ ပီး နောက်ကနေထပ်ဆောင့်လိုက်တယ်. နောက်တော့ ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့လွှရဲမ်းနေတဲ့ နို့ ကြီးတွေကို အားရပါးရ ဆုပ်ညစ်ရင်း ဆောင့်လိုက်တာ ဆယ်ချက်လောက်လည်း ကြကော ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ အဖုတ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်ကုန်တယ်.ဖင်ကြီးကလည်းကြီး အဖုတ်ကလည်းကြပ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းကောင်ကောင်းနဲ့ခါးကိုဆွဲပြီးနောက်ကနေ အားရပါးရဆောင့်ပစ်လိုက် တယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီး ရဲ့ကုန်းနေတဲ့ နောက်က ပြူထွက်နေတဲ့အဖုတ၀်ကို ကွန်တော်လည်းလိင်တန်ကြီးနဲ့တေ့ပြီး ဖိသငွ်းလိုက်တယ်.com နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကို ဆွစဲုပ်ပြီးနမ်းနေလိုက်တယ်. နောက်တစ်ခေါက်စာပေါ့-------ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေကို နမ်းနေရာကနေရပ်လိုက်ပြီး ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးတစ်တစ်ရစ်ရစ်ကြီးကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မျက်နှာချင်းဆိုင် အိပ်နေလိုက် သေးတယ်. ---ဖွတ-် --ဗွတ်---ဘွတ်---အင်း--အား---အ--အ ဒေါ်ကရင်မကြီးလည်း ကုန်းရက်ကနေပြီး ဖင်တုန်ကြီးကို နောက်ကိုပြန်ပြီး ကော့ကော့ပေးတယ်.
ပြီးမှ လိင်တန်ကြီးကို အဆုံးထိထုတ် အဆုံးထိ ဖိဆောင့်လိုက်နဲ့ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်လိုက်တယ်. ဒေါ်ကရင်မကြီး မှုတ်ပေးတာကိုလည်း ဇိမ်ခံတတ်နေပြီ.ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ဖင်သားကြီးတွေက ထွားထွားအိအိ ကြီးကလည်းကြီးဆိုတော့ ဒီနည်းကတော်တော်လေး ထိတယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.ဒေါ်ကရင်မကြီးကလည်း ပြန်ပြန်ပြီးတော့ သူမရဲ့ ဖင်ကြီးကို ၀ိုက၀်ိုက်ပြီး ပြန်ကော့ ကော့ပေးလာတယ်.မှောက်ရက်ကျနေတဲ့ ဒေါ်ကရင်မကြီးပေါ်ကို ထပ်ရက်မှောက်ချလိုက်ပြီး လိင်တန်ကြီးကို အဖုတ်ထဲ ထပ်ဖိသငွ်းလိုက်တယ်. ဘယ်အချိန်ကထွက်သွားလဲမသိဘူး. ----အိုး---အိုး---အား--အား---အ--အ--အ နောက်ထပ်သုံးလေးချက်လောက်လည်း ဆက်ဆောင့်လိုက်ကော အရည်တွေနောက်တကြိမ်ပန်းထွက်ကုန်ပြန်တယ် ကျွန်တော့ရဲ့ လက်တွေလည်းညွတ်သွားပြီး ဒေါ်ကရင်မကြီးပေါ် တအိအိနဲ့ပြိုကျသွားတယ်.အရည်တွေရွေဲ နတော့ လိင်တန် ကြီးလည်း တဘွတ်ဘတွ် မြည်သံပေးရင်း အဖုတ်ထဲ အဆုံးထိဝင်သွားတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ အဖုတ်ထဲ ကိုထိုးဝင်သွားတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ဖင်သွားထွားထွားအိအိကြီးနှစ်လုံးက ဖိညှစ် ထားသလိုဖြစ်နေတာကိုး.ဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်း လိင်တန်ကြီးလည်း ကြင်လာပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြီးချင်လာတယ်. ----ဗြစ်---ဖွတ-် ဖွတ-် --အိုး---အားး---ရှီး---အ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေး ကောင်းသွားတယ်.ဆောင့်ချ လိုက်တိုင်း ဖင်သားအိအိကြီးတွေကို ဖိမိပြီးတော့ အိအိထွေးထွေးနဲ့အားရပါးရ လည်းရှိတယ်. ကျွန်တော့ရဲ့ လက်တွေနဲ့ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့နို့ ထွားထွားကြီးတွေ ကိုနောက်ကနေဖိကိုင်ညှစ်ချေလိုက်ရင်း နားရွက်ဖျားလေးတွေကို သွားတွေနဲ့ မနာ့တနာလေးဖိကိုက်လိုက်တယ်.ဒါနဲ့လိင်တန်ကြီးကို အပြင်ထိဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အရှိန်နဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်သငွ်းလိုက်တယ်.အဲဒါနဲ့ လိင်တန်ကြီးကို ဒစ်ဖျားလောက်ထိဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပြန်ဖိဆောင့်လိုက်တယ်.အဲ့ဒါနဲ့ အန်တီလေးရဲ့အိပ်ယာကို သေသေချာချာလေး ဆွဆဲန့် ရှင်းလင်းပေးပြီးထွက်လာခဲ့တယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့်ပညာတွေလည်းတော်တော်တတ်နေပြီ.အောက်ကနေပြီးအသက်ကို ၀အောင်ရှူ နေတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးဆိုလည်း သူယောက်ျားကိုတောင် Pdf-LA Page 15 .ဒေါ်ကရင်မကြီးက ရင်ခင်ွထဲကနေပြီးကျွန်တော့ကို မော့ကြည့်နေသေးတာနဲ့သူမရဲ့ မျက်နှာကို အနမ်းလေး တွေပေးလိုက်သေးတယ်.နားသယ်စပ်တွေမှာချွေးတွေစို့ လို့ .mmcybermedia.ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့နို့ ကြီးတွေ ကိုနောက်ကဆွဲ ရင်းခပ်မြန်မြန်လေး ဆက်ဆောင့်လိုက်တယ်.ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်း မျက်လုံးတွေစင်းလာပြီး အိပ်ပျော်သွားတော့တာပဲ.ဒီလိုကုန်းပြီးချတာ မှောက်ရက်ချတာတွေကို ဗီဒီယိုကားတွေမှာပဲ ကြည့်ဖူးတာ.ကျွန်တော်ကတော့ အရည်တွေ ထွက်ကုန်ပေမယ့်အရှိန်ကမသေသေးဘူး. ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ဖင်လုံးကြီးလည်း နောက်ကိုကောက်ထွက်လာတယ်.ကျွန်တော်လည်း ဒေါ်ကရင်မကြီးရဲ့ ဖင်ကြီးကို ခွရက်ဒူးထောက်လိုက်ပြီး နို့ နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်.com ဒေါ်ကရင်မကြီးလည်း ညီးသံရှည်ကြီးပေးပြီး ကုတင်ပေါ်ထောက်ထားတဲ့လက်တွေညွှတ်ကုန်ပြီး ၀မ်းလျားထိုး ကျသွားတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးလည်း မောနေတယ်ထင်တယ်. အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်ကရင်မကြီးလည်း မကြာခဏဆိုသလို ခိုးစားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့.အပေးအယူတွေမျှလာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ချက်ချင်းဆောင့်နေရာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်လေးလည်းရလာတယ်.အခုမှပချဲရတာလေ.ပြီးတော့ဒေါ်ကရင်မကြီးရ့ဲ ကိုယ်လုံးတစ်တစ်ကြီးကို ကျွန်တော့ရင်ခင်ွထဲ့ ပွေ့ ဖက်ထားလိုက်တယ်.ကျွန်တော့တကိုယ်လုံးမှာလည်း ချွေးတွေနဲ့ စိုနေတာပဲ.ကျွန်တော်အိပ်ယာကနိုးလာတော့ ဒေါ်ကရင်မကြီးကို မတွေ့တော့တော့ဘူး.ဒေါ်ကရင်မကြီး ပေါ်ကနေလိမ့် ပြီးဆင်းလိုက်တယ်.
သုံးခေါက်လောက်ကို ဆွဲဖြစ်ကြတယ်. အဲဒီနေ့ ကပေါ့ နေရောင်ကမျက်နှာပေါ် ထိုးနေတော့မှပဲ အိပ်ရာကနိုးတော့တယ်.အတွင်းခံဘောင်ဘီလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းရာလေးတွေက အနားသပ်ထားလိုက်တာများ ၀ိုင်းနေတဲ့ အိုးကြီးကို ဘောင်ခပ်ထားသလိုပ.တကယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ မဖြစ်အပျက်လေးပေါ့.အကယ်ကို ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဟဲဗီးဆိဒ်ုကြီး.အိမ်နေရင်း အောက်ခံမပါဘဲ ဘောင်း ဘီအပျော့အတိုလေးတွေများ ၀တ်ထားပြီး ဆောင့်ကြောင့်လေးများထိုင်လိုက်ရင် ဘောင်းဘီသားနဲ့ ကပ်ပြီး အဖုတ်ကြီးများ တွန်းထွက်လာတော့မလို ခုံးခုံးကြီးကိုထလို့ .အိပ်ခန်းအပြင်ကို ထွက်လာတော့ ထမင်းစားခန်းမှာအန်တီလေးကို မတွေ့ ဘူး.ဒါကကျွန်တော့ စာရင်းထဲက နှစ်ယောက်လေ နောက်တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ အတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်ညိုမီလေ.ဘယ်လို လုပ်ရမလဲမသိဘူး.ဲ ဘော်ဒီကလည်း အမြဲဆော့နေတော့ မိုက်တယ်.တခါတလေးဆို မိုးတောင်ချုပ်တယ် သူတို့ အနေနဲ့ တော့ ကျွန်တော့ကို အရွယ်မ ရောက်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို့ ထင်နေကြတယ်.ကျွန်တော်တို့ အိမ်အောက်ထပ်မှာငှားနေတဲ့ဆရာမဒေါ်နွယ်နီနဲ့မမပိုးဥတို့ သားအမိ.တစ်ခါဆွရဲင်လည်း အနည်းဆုံးနှစ်ချီပ.လွယ်မယ်ပေါ့.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.စကားပြောရင်တောင် ပုတ်လားခက်လားနဲ .နှစ်ယောက်လုံးတော်တော်လေးမိုက်တာ ဆရာမဒေါ်နွယ်နီ ဆိုရင် အသက်ကတော့ လေးဆယ့်ငါးလောက်တော့ရှိပြီ ဒါပေမယ့် ဂျောကတော့တောင့်တုံး.ဲ အိမ်နေရင်း ကြိုးတစ်လုံးတွေ ဘောင်းဘီအပျော့တွေ ၀တ်ထားရင်များ ကြိုးတစ်လုံး အိင်္ကျီအောက်က ရုန်းကန်ထွက်နေတဲ့ နို့ ကြီးတွေများ ဘရာဇီယာကမနည်း ထိန်းထားရတယ်.ဒါပေ မယ့် အန်တီလေးရဲ့ အခန်းရှေ့ ကိုရောက်တော့ တံခါးလေးက ခပ်စေ့စေ့လေးဟလို့ .mmcybermedia.ဆရာကဒေါ်ညိုမီကျတော့လည်း ကျွန်တော်က သူ့ ကျူရှင်တတ်တာဆိုတော့ အပတ်စဉ် တစ်ပတ်နှစ်ရက် သူ့ ကားနဲ့ သူ့ အိမ်ကိုလိုက်နေကျ. ကျွန်တော်နဲ့တစ်ပတ်ကိုနှစ်ခေါက်..ဲ ဒီဆော်ကြီးတွေကိုသာဆွရဲရင်ဆို ပြီးကျွန်တော့မှာအစီအစဉ်တွေဆွေဲ နရတာ.တော်တော်တောင်နေမြင့်နေပြီ.အန်တီလေးက စောစောထနေကျပါ.မဆိုးပါဘူး.အသားကလည်း နှင်းပွင့်တွေလိုကိုဖြူတာ.ဒီတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲ ရပြီပေါ့.သူကနည်းနည်း နီးစပ်တယ်.မနိုးသေးလို့ များလား.ဲ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့စိတ်တွေက အရမ်းကြွနေပြီ ဒေါ်ကရင်မကြီး တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အားမရတော့ဘူး မိန်းမဆို ဆွချဲင်နေပြီ.ဆရာမ ဒေါ်ညိုမီကတော့ အ သားညိုညိုနဲ့လူကတော့ တောင့်သလားမမေးနဲ့ကျွန်တောတို့ ကျောင်းမှာသူ့ ကို မပြစ်မှားဘူးတဲ့ ကျောင်းသားမရှိဘူး.ဒါပေမယ့်ခက်တာက ဆ ရာမဒေါ်နွယ်နီ သူကကျွန်တော်နဲ့အထိအတွေ့ နည်းတယ်.အမို့ အမောက်အရှိုက် အ၀ှမ်းအားလုံး သူ့ နေရာနဲ့ သူပ.ကျွန်တော်လည်း တံခါးလက်ကိုင်ကို ဆွဲပြီးဝင်မလို့ လုပ်ပြီးမှအတွင်းကမြင်ကငွ်းကြောင့်ခြေလှမ်း Pdf-LA Page 16 .အတွေးတွေ အများကြီးနဲ့ အန်တီလေး အိပ်ခန်းကိုလာခဲ့လိုက်တယ်.com ဒီလောက်ပေးပါ့မလားသိဘူး. သူ့ သမီး မမပိုးဥဆိုလည်း လူကသာ နောက်ဆုံးနှစ်တတ်နေတာ.ပြီးတော့အ တူသမီးလေ ခါးသိမ်သိမ်အောက်ကဖင်များ ထွားလိုက်တာဆို အရင်းတုတ်ပြီးအဖျားသွယ်တဲ့ ပေါင်တုတ်တုတ်ကြီး ကတောင့် ထောက်ယူထားရတယ်.ပေါက်ထက်ွတော့မယ့်အတိုင်းပဲ.ကျောင်းစိမ်းလုံချည်အောက်က လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း အအိအိနဲ့ ယိမ်းထိုးတတ်တဲ့ဖင်ထွားထွားကြီးနဲ့ဖြူအက်ျီအောက်က အပြင်ကိုတောင် ကော့ပြီးထွက်နေတဲ့နို့ အုံထွားထွားကြီးတွေပိုင်ရှင်ပေါ့.နိုင်ငံခြားကို အဲဗားသွားနေရတာ.ယောင်္ကျားကသင်္ဘောသား. ကျွန်တော်တို့ ကိုကျောပေးပြီးစာသင်ရင်များ ကောင်းလိုက် တဲ့ အိုးကြီး .အမှန်ကအန်တီလေးကို နှိုးမလို့ပါ.ကျွန်တော်နဲ့ မှမျိုးစုံကို ပေးနေရတယ်.မမပိုးဥကတော့ ကျောင်းအားရင် မကြာခဏအိမ်ပေါ်တတ်လာပြီး အန်တီလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စကားလာပြောနေကြ.အဲ့ ဒီအချိန်လေးတွေကို ဖန်ရမယ်.ဒီလိုနဲ့ ဆရာမဒေါ်နွယ်နီနဲ့ ပါ အဆင်ပြေလာနို င်မယ့် အဖြစ်လေးက ကျွန်တော့ဆီမှာပေါ် လာတယ်.နေတာထိုင်တာက ကလေးလိုပ.ကျွန်တော်ဆချွဲင်တဲ့ သူတွေကိုစာရင်းပြုထားပြီး အခွင့်လေးတွေရအောင် ကြံနေရတော့တယ်.
ခေါင်းထဲမှာလည်း အတွေးစတွေက အမျှင်တန်းလို့ .တစ်ခုလပ်.အဲဒီမှာပိုဆိုးသွားပါကော အိမ်နေရင်း အင်္ကျီပါးအောက်က အခုခံမဲ့ လုံးဝန်းဖွံထွားတဲ့ ရင်းသားအစုံက ကျွန်တော့နောက်ကျောကို အိအိထွေးထွေး ဖိမိနေပါလေကော.နေ့စဉ် လေ့ကျင့်ခန်းမပြတ်ခဲ့ တာမို့ အန်တီလေးရဲ့ကိုယ်မှာဘာအဆီပိုမှမရှိဘူး.အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အလှဆုံး အရွယ်ပ.ဲ ဦးလေးနဲ့ တော်မှအန်တီလေ.နဂိုကမှရင်ခုန်နေတဲ့ ကျွန်တော် ရင် တုန်တဲ့ အဆင့်ကို ပြောင်းသွားတယ်.အန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကလည်း စည်းချက်အတိုင်းကို လှုပ်ယမ်းလို့ ယိမ်းနွေဲနတယ်.ကျွန်တော်သတိထားမိတော့ ကျွန်တော့ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေတယ်.တံခါးကိုဘေးတိုက်အနေအထားပေးပြီးကနေတာလေ.အန်တီလေးက တော်တော်လေးချောတာ.ကျွန်တော့မျက်ဝန်းတွေဆီမှာ အန်တီလေးရဲ့အလှက ပြန်မထွက်တော့ဘူး.လင်ဘက်ကပါတဲ့ တူတော်သူကို ဒီလောက်စေတနာ ထားတာ အန်တီလေးက ချီးကျူးလောက်ဖယ်ွပါပဲ.တရစ်၀၀ဲနဲ့ ကိုလည်နေတော့တာ.com တွေတန့် သွားတယ်.ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျွန်တော့ကိုနောက်ကသိုင်းဖက်လိုက်တယ်.ဒီလိုမျိုးတစ်ခါးမှမဖြစ်ဖူးပါဘူး.အန်တီလေးက ကျွန်တော့ကိုမမြင်ဘူး.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www. ---ဟဲ့ -----သားကိုရဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ----ဘာမှလည်းမလုပ်ထားပါလား------ဟွန်း---မနက်စာကိ-ု --အန်တီလေးကပဲ--ပြင်ရမယ်ပေါ့---အန်တီလေးက ကျွန်တော့နောက်ကို ဘယ်အချိန်ကရောက်နေလဲတော့ မသိဘူး.လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ အန်တီလေးရဲ့  အသားဆိင်ုတွေကလည်း ရင်ဖိုချင်စရာလှုပ်ခတ်လို့ .အခန်း ထဲကကက်ဆက်သံ မြူးမြူးလေးက ကျွန်တော့နားစည်ထိ ရောက်လာတယ်.mmcybermedia.အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်ခဲ့ ဘူးတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လုံးက အပျိုတွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်တယ်.ဒါပေ မယ့်အန်တီလေးက ငယ်ငယ်တည်းကစောင့်ရှောက်လာတဲ့ ကျွန်တော့ကို စိတ်မချလို့ တဲ့ နောက်အိမ်ထောင်မပြုဘုးဆိုပဲ.မုဆိုးဖို ကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေ လူပျိုတွေတောင်ပါသေးရဲ့ .အန်တီလေး ရေချိုးပြီး အ၀တ်စား လဲလာတယ်ထင်တယ်.ဘယ်လောက်တောင် ကြည့်နေမိလဲမသိတော့ဘူး.အန်တီလေးဟာ တကယ်ဆို ကျွန်တော်နဲ့ ဘာမမှမတော်ပ.လှုပ် ရှားလိုက်တိုင်း ရင်အစုံက ပျံတတ်တော့မလို ခုန်ပေါက်နေပြီး တင်သားတွေကလည်း စည်းချက်ကျကျကို လှုပ်ခါနေကြတာ.ကိုယ်လုံးတင်လား အန်တီလေးရဲ့ အလှကကော. Pdf-LA Page 17 .အန် တီလေးကက်ဆက်ကို ပိတ်တော့မှပဲ ကျွန်တော်လည်း အသိစိတ၀်င်လာပြီး ထမင်းစားခန်းကို ခြေလှမ်းတွေပြန်လှည့်လိုက်တယ်.သုံးဆယ့်ငါးနှစ်ဆို တာဘာကြီးသေးလို့ လဲ.အခန်းထဲက အန်တီ လေးကတော့ ကျွန်တော့ကိုမမြင်ဘူး အေရိုးဘစ် ကနေဆဲပါပဲ.မြူးမြူးကြွကြွတေးသံနဲ့ အတူအန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်ကယိမ်းနွဲ့ ရင်း ကွေးချည် ဆန့်ချည် ခုန်ချည် ထိုင်ချည် ဖြစ်နေ တယ်.အန်တီလေးကို ကြိတ်ပြီးချီးကျူးရင်း ကျွန်တော့စိတ်တွေက လက်ရှိအခြေအနေကို ပြန်ရောက်လာတယ်.အဆိုးဆုံးကတော့ ခပ်မို့ မို့ ရင်သားတွေနဲ့ဖွံ့ ဖွံ့ ထွားထွားတင်သားတွေပေဲပါ့.ကျွန်တော့ကိုသိုင်းဖက်လိုက်ရင်း အန်တီလေးကသူ့ ကိုယ်လုံးကိုပါ ကျွန်တော့ပေါ်ကိုမှီချလိုက်တယ်.ပုံမှန်လည်း အန်တီလေးက မနက်တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ် နေကျပါ.ထမင်းစားပွေဲရာက်တော့ ခုံတစ်လုံးဆွဲယူပြီး ငူငူ ကြီးထိုင်နေမိတယ်.ဲ ဦးလေးဆုံးပြီး ကတည်းက အန်တီလေးကို လက်ထပ်လိုသူတွေရှိခဲ့ တာ တပုံကြီး.အခုဦးလေးက လည်းရှိတော့တာမှမဟုတ်တာ.အန်တီလေးလေ အိမ်နေရင်း ဘောင်းဘီတိုပါးပါးလေးနဲ့ တီရှပ်ပွပွကြီး ၀တ်ပြီ အေရိုးဘစ် ဆွေဲနတယ်.ကိုယ်သင်းနံလေးကို မွှေးလို့ .ဒါပေမယ့်ဒီနေမှ ကျွန်တော်ကအန်တီလေးကို ပိုပြီးသတိထားမိတာ.အသက်ကလည်း ငယ်တုံးပဲလေ.
အန်တီလေးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော့ပြန်သတိထားမိလာတာ အန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကျွန်တာ့ကျောပေါ်က ခွာသွားတာနဲ့စောစောကနွေးထွေးမှုတွေပါ ကျွန်တော့ဆီက ပြန်ကွာသွားသလိုပဲ.ပြည့်ဖောင်းတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ.ကျွန်တော်လည်း လျှောက်လှမ်းသွားတိုင်း တုန်ခါသွားတဲ့ အန် တီလေးရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို အသက်မဲ့ သူတစ်ယောက်လို ငေးကြည့်နေလိုက်တယ်.လက်ကထောက်သွားတာနဲ့ ကိုယ် အောက်ပိုင်းကလည်း နောက်ဘက်ကို ကော့ထက်ွလာတာ တင်းတင်းရင်းရင်းတင်သားတွေက ကျွန်တော့ဆီးစပ်ပေါ် ဖိကပ်မိသွားတယ်.ကျွန်တော် လည်း သံပတ်ပေးလိုက်တဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို အလိုလိုနေရင်း အန်တီလေးနောက်ကို ရောက်သွားတယ်.ဲ အန်တီလေးကတောင် သာလိမ့်ဦးမယ်.ဖက်လိုက်တဲ့ အရှိန်ကော ကျွန်တော့ကိုယ်လုံးရဲ့ ဖိအားကြောင့်ကောပေါင်းပြီး အန်တီလေးရဲ့ လက်တွေ ကြက်ဥကိုမမှီမကန်းယူနေရာက အောက်ကိုပြန်ပြုတ်ကျလာပြီး ရှေ့ ကစင်ပေါ် ထောက်ရက်သားလေးဖြစ်သွားတယ်. ပြီးတော့ ကြက်ဥယူဖို့နံရံကပ်ဗီရိုဆီ လျှောက်သွားတယ်.ဖိနမ်းနေရင်းကနေပဲ အန်တီလေးကသူ့ မရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ကျွန်တော့ပါးပေါ်က ဖယ်လိုက်ရင်း သူမရဲ့ ပါးပြင်နဲ့ ကျွန်တော့ပါးနဲ့ ကိုကပ်လိုက်တယ်.အန်တီလေးအနမ်းတစ်ချက်နဲ့ တင် ကျွန်တော့မှာ အသက်ရှူသံတွေတောင် မှားသွားတယ်.အောက်ကညီငယ်က လည်း တဖြည်းဖြည်း တင်းမာလာပြီး အန်တီလေးရဲ့ တင်သားတွေကို ခေါင်းနဲ့ တိုက်တော့တာပဲ.အန်တီလေး ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်အင်္ကျီရှည်က ကားစွံ့ ဖွံ့ ထွားတဲ့ အန်တီလေးရဲ့ကိုယ်လုံး အလှကို မဖုံးအုပ်နိုင်ပါဘူး.ကျွန်တော်လည်း အန်တီလေးရဲ့ ခါးသိမ် သိမ်လေးကို ပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးဖက်လိုက်တယ်. ---အင်း ---ဟုတ်---ကျွန်တော့အသံကတောင် အသက်မပါတော့သလို ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ .အန်တီလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းကော နှာတံချွန်ချွန်လေးပါ ကျွန်တော့ပါးပေါ်ကို ဖိပြီး ခပ်ကြာကြာလေးနမ်းလိုက်တာ.တဒိုင်းဒိုင်းကိုဖြစ်နေတာ.အန်တီလေးလည်း ကျွန်တော့ဆီကပြန်ခွာသွားပြီးနောက် ဂက်စ်မီးဖိုကိုဖငွ့်ပြီး ဆီအိုးကိုတင်လိုက်တယ်.ကျွန်တော့မှာသာ နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့ အထိအတွေ့ တွေ ကြောင့်ရင်ခုန်သံတွေက ငြိမ်မနေနိုင်ဘူး.သွယ်လျတဲ့လက်တံတွေနဲ့ပြည့်ဖြိုးတဲ့ လက်မောင်းသားတွေ.ကျွန်တော့ကိုသိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်တွေကလည်း ပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေး ဖြစ်လာတယ်.mmcybermedia.ထွာစိုင်သာသာလောက်သာရှိတဲ့ခါးသိမ်သိမ်လေးအောက်ကအနုပညာမြောက်စွာ ပုံသငွ်း ထားတဲ့ အိုးကောင်းတစ်လုံးလို လုံးဝန်းတင်းရင်းတဲ့တင်သားတွေ လက်ရာမြောက်စွာ ထွင်းထုထားတဲ့ရွှေစင်ရုပ်တုတစ်ခုလိုပ. ပြီးတော့ ဂါဝန်အင်္ကျီအောက်က တောင်ပူစာငယ်လေးတွေလို ကြွရွေနတဲ့ ရင်သားတွေ.ဲ ကျွန်တော့လက်တွေက အန်တီလေးရဲ့ ခါးသိမ်သိမ်လေးကို နောက်ကနေပြီး သိုင်းဖက်လိုက်တယ်.အန်တီလေးလည်း အထိအတွေ Pdf-LA Page 18 .လက်တစ်ဖက်က တံခါးကိုဖငွ့် နောက်တစ်ဖက်က နံရံကပ်ဗီရိုပေါ်က ကြက်ဥကို အန်တီလေး ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး ခေါင်းလေးမော့ပြီး လှမ်းယူလိုက်တာအန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဟာ ဂါဝန်အောက်မှာ ကြွတတ်နေတာပဲ.အန်တီလေးက ကျွန်တော့ကို တင်းတင်းလေးဖက်ထားရင်း မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ငြိမ်နေတယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.အန်တီလေးရဲ့တင်သားအိအိကြီးတွေကလည်း ကျွန်တော့ဆီးစပ်ကို ပိုပြီးဖိပွတ်မိသွားတယ်.com အန်တီလေးက နောက်ကနေပြီးကျွန်တော့ပါးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်သေးတယ်. ---ကဲ---မနက်စာ--ဘာစားမလဲ---ကြက်ဥကြော်နဲ့ကော်ဖီပဲလား--အန်တီလေးရဲ့အမေးစကားသံကြားတော့မှ ကျွန်တောလည်း စိတ်နဲ့ လူနဲ့ ပြန်ကပ်တော့တယ်.နမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာ ရွှတ်ကနဲ မဟုတ်ဘူး.ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာတစ်ခုက ကျွန်တော့ကို တွန်းအားပေးနေသလိုပ.ဖက်ထားတာက ပိုပြီးတင်းကြပ်လာတာနဲ့ အမျှအန်တီလေးရဲ့လုံးဝန်းအိထွေးတဲ့ရင်သားအစုံရဲ့အထိအတွေ့ ကလည်း ကျွန်တော့ကြောပြင်ပေါ်မှာ ပိုပြီးနူးညံ့အိထွေးလာတယ်လေ.
အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.အန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး နောက်ဖက်ဆီပါလာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်တော့လိင်တန်ကြီးကလည်း အန်တီလေးရဲ့ ဖွံ့ ဖွံ့ ထွားထွားဖင်သားနှစ်ခုကြားကို လျောထိုးပြီး ၀င် သွားပါလေကော. ------အမလေး---- Pdf-LA Page 19 .လက်ချောင်းတွေကလည်း နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကို အင်္ကျီပေါ်ကနေပဲ စမ်းပြီးဖိချေပေးလိုက်တယ်.ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အသက်ရှူသံတွေကလည်း မောပန်းနေတဲ့ သူတွေကို ပြင်းထန်လာတယ်.ကြမ်းရှရှ အမွှေးရိုင်း တွေရဲ့ အထိအတွေ့ က ဂါဝန်စကိုကျော်ပြီး ကျွန်တော့လက်တွေဆီကိုရောက်လာတယ်.အန်တီလေးရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ပွတ်သပ်ရင်း လက်ကဂါဝန်ကိုပါ တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ ဆွဲပြီးလှန်လာလိုက်တာ ဂါဝန်စက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေါင်လယ်လောက်ရောက်လာတယ်.ကိုယ်အောက်ပိုင်းက လိင်တန်ကြီးကလည်း အန်တီလေးရဲ့ ဖင်သားနှစ် ခုကြားမှာ ပွတ်သပ်နေရင်း အတွင်းနံရံတွေကိုပါ တွန်းထိုးလာတယ်.လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပေါင်သားတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်ရင်း လက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်းရင်းတွေထိစတွဲ င်လာလိုက်တာ အမွှေးဖျားကြမ်းကြမ်းလေးတွေက လက်ကိုလာပြီး မထိတထိဖြစ်လာကော အဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်လိုက်မယ်ပေါ့.ကျွန်တော့အ နမ်းတွေကလည်း ပါးပြင်ကဆင့်အန်တီလေးရဲ့ ဂုပ်ပိုးသားတွေ လည်ပင်းသားနုနုတွေထိပါရောက်လာတယ်.လုံးဝန်းအိစက်တဲ့နို့ လေး နှစ်လုံးကို လက်တွေနဲ့ ခပ်ဖဖွေလး ဖြစ်ညှစ်လိုက်တယ်.ကျွန်တော့လည်း အန်တီလေးရဲ့ ပါးပြင်အနှံ့ ကို မနားတမ်းအနမ်းတွေချွေနေမိတယ်.မွှေးချိုတဲ့ ရှန်ပူရနံ လေးတွေက ကျွန်တော့ကို ဆက်တိုက်နမ်းဖို့ ကို တိုက်တနွ်းနေသလို့ ပဲ . ----သား---ကိုရဲ ----နည်းနည်းလျော့ပါဦး---အန်တီလေး အသက်ရှူလို့ မ၀တော့ဘူး----အန်တီလေးအသံ နားထဲဝင်လာတော့မှ ကျွန်တော်လည်း အန်တီလေးကို ဖက်ထားတာ လျော့လိုက်ပြီး လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို အန်တီလေးရဲ့ ဗိုက်သားချပ်ချပ်လေးပေါ် ခပ်ဖဖွေလး တင်လိုက်တယ်.ပူနွေးတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံရဲ့ အနမ်းကြောင့်လား ပူပူနွေးနွေး လိင်တန်ကြီးရဲ့ အထိအတွေ ကြောင့်လားတော့မသိဘူး. ---သား---ကိုရဲ့ ကွာ ---ဒီမှာအန်တီလေး ကြက်ဥကြော်မလို့ ---မနက်စာမစားဘူးလား--အန်တီလေးရဲ့ အမေးကိုပြန်ဖြေဖို့ တောင်ကျွန်တော်သတိမရတော့ဘူး ကျောပြင်ပေါ်ဝဲကျနေတဲ့ အန်တီလေးရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို နမ်းရှိူက်လိုက်တယ်. လက်တစ်ဖက်ကို အန်တီလေးရဲ့ နို့ ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်နေရာကနေပြီး အန်တီလေးရဲ့ ရှေ့ ဘက် အဖုတ်လေးကို အပေါ်ကနေပြီး ခပ်ဖွဖွေလးပွတ်ပေးလိုက်တယ်.အန်တီလေးရ့ကဲိုယ်လုံး တစ်ခုလုံး နက်ဝင်သည်လို တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ဖြစ်လာတယ်.ကျွန်တော့အောက်ပိုင်းကလည်း အန်တီလေးရဲ့  ဖင်ကြီးတွေကို နောက်ကနေပြီး ဆောင့်ပေးနေမိတော့တယ်.အန်တီလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းသွားပြီး လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့ခေါင်းကို နောက်ပြန်လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်.mmcybermedia.လက်ဖ၀ါးကို အ ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တုံးမှာ အန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံး ဆက်ကနဲ့ တွန့်လိမ်သွားတယ်.ကျွန်တော့ရဲ လက်နှစ် ဖက်ကလည်း အန်တီလေးရဲ့ ဗိုက်သားချပ်ချပ်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ရင်း အန်တီလေးရဲ့ ဂါဝန်အောက်က အခုခံမဲ့ တဲ့ရင်သားတွေပေါ်ရောက်လာတယ်.အန်တီလေးရဲ့ ဆံနယ်ွလေးတွေကို အနောက်ကနေပြီး တရပ်စပ်ကိုနမ်းနေမိတော့တာ.com့ တွေကိုသတိထားမိလာတယ်ထင်တယ်.ကျွန်တော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အန်တီလေးကို ကျွန်တော့ဆီဆွဲယူလိုက်ရင်း အန်တီလေးရဲ သွေးကြောစိမ်းလေးတွေ ဖြာယှက်နေတဲ့ ပါးဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖိနမ်း လိုက်တယ်.ကိုယ်လုံးနှစ်ခုနည်းနည်းခွာသွားတာနဲ့ ကျွန်တော့လိင်တန်ကြီးကလည်း အန်တီလေးရဲ့ ဖင်သားကြီးတွေရဲ့ အလယ်တည့်တည့်ကို သွားပြီးဦးတည်နေတယ်.
ဒါနဲ့ အောက်ထပ်ကို ချောင်းကြည့်ဖို့ အပေါက်ရှာလိုက်တယ်.com အဲဒီတော့မှပဲ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားမိတော့တယ်..ပြီးတော့ဂက်စ်အိုးကို ပိတ်လိုက်တယ်.ပြီးတော့. အောက်မှာဆရာမဒေါ်နွယ်နီရယ်လေ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဖက်ပြီးဖြစ်နေတာ.. အန်တီလေး ကျွန်တော့ဘက်လှည့်လာပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ လည်ပင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်တယ်..ကျွန်တော့ အောက်တည့်တည့်က ဆရာမဒေါ်နွယ်နီရဲ့ အခန်း.အသက်ရှူမ၀သလိုကိုရင်မောလာတာ.အဲဒီလူက အကိုင်အတွယ် Pdf-LA Page 20 ...အခုထက်ထိ အန်တီလေးနဲ့ အထိအတွေ့ တွေကကျွန်တော့ ရင်ကိုနွေးထွေးနေစေတုံး.အန်တီလေးကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ အ၀တ်လဲပြီး အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်.ကျောင်းချိန် ကလည်း လိုသေးတော့ အိပ်ရာပေါ် တော်တော်ကြာကြာလေး အိပ်နေမိသေးတယ်...ှ ထပ်တောင်မတွေးရဲဘူး..အန်တီလေးကလည်း ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောပြီးလှည့်ထက်ွသွားတယ်.ကျွန်တော့အောက် တည့်တည့်က.ဒါနဲ ၀မ်းလျားထိုးပြီး အောက်ကိုချောင်းကြည့် လိုက်တော့.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www..ပွဲကတော်တော်ကို ကြမ်းနေပြီ အပေါ်က ကြည့်ရတာ ဆရာမဒေါ်နွယ်နီကို မြင်ရမေမယ့်အမျိုးသားက ဘယ်သူလဲမသဲကဘွဲူး....ဒေါ်ကရင်မကြီး..သူတို့ နှစ်ယောက်ခပ်တင်းတင်းကို ဖက်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နမ်းနေလိုက်ကြတာ အငမ်းမရပဲ....ပြီးတော့နှုတ်ခမ်းလေးကို ချွန်ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့မျက်နှာနား ခပ်ဖြည်းဖြည်းခြင်းစီ တိုးလာတယ်.ပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့ ကိုယ့်ဦးလေးရဲ ဇနီးကိုမ..အသံကနောက်တစ်ခါ ထပ်ပေါ်လာတယ်.ကျွန်တော့လည်းထပ်ပြီးဘာမှမလုပ်ရေဲတာ့ဘူး.ကျွန်တော်ကတော့ ဆန့် တန့် ငံ့ငံ့ ဖြစ်ပြီးကျောက်ရုပ်တစ်ခုလို မတ်မတ်ကြီးရပ်လို့ ကျန်ခဲ့တယ်လေ..ကျွန်တော့အဖြစ်က လူသိရင်တောင် ရီစရာပဲ...ဂက်စ်အိုးပေါ်က ဆီအိုးကဆီတွေက ပွက်ပြီး ဘေးကိုစင်တာအန်တီလေးကို ထိသွားတယ်.. ကိုယ့်ထက်အသက်ထက်ဝက်လောက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီး.ကုန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ အောက်ကို ၀ိုးတ၀ါးလှမ်းမြင်ရတယ်လေ. ----ကဲ---ကိုယ်တော်ချော---ကျောင်းသွားရဦးမယ်မလား---အ၀တ်သွားလဲတော့--ရုတ်တရက် ကျွန်တော့မှာ အငိုက်မိသွားသလိုပဲ.အမျိုးသားရဲ့ လက်တွေက ဆရာမဒေါ်နွယ်နီရဲ့ တုတ်ခိုင်ဖွံ့ ထွားလှ တဲ့ ဖင်ကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ဆုပ်ချေဖြစ်ညှစ်နေလိုက်တာဗျာ ဆရာမကြီး ကော့ပျံနေတာပဲ.ကျွန်တော့ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်းကို ခုန်နေတုံး.အန်တီလေးရဲ့ အသံကမာသွားသလို မျက်နှာကလည်းတည်သွားတယ်လေ.တော်တော်လေးကို စိတ၀်င်စားသွားတာ.အန်တီလေး အပြင်ထွက်သွားတော့မှပဲ ကျွန်တော့အခန်းကိုပြန်လာပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တကိုယ်လုံးပစ်ချပြီး လှချဲ လိုက်တယ်.ဒါပေမယ့် အန်တီလေးရဲ့အနမ်းက ကျွန်တော့မျှော်လင့်ထားသလို မဟုတ်ဘဲ နှဖူးပေါ်ဖွဖွေလး ရောက်လာတယ်လေ.ဘာများဖြစ်တာလဲ...ပြီးတော့မှ ရေချိုးမယ်ပေါ့..အဲ့ဒါနဲ ကြမ်းကြားပိတ်နေတဲ့ အမှိုက်နည်းနည်း လောက်ကို တုတ်တံလေးနဲ့ ထိုးချလိုက်တယ်.ကျွန် တော့ရဲ့ အောက်နားမှာ ပျဉ်ကြမ်းခင်းက နည်းနည်းဟနေတယ်....mmcybermedia.....့ .အပေါက်လေးက နည်းနည်းပိုပငွ့်သွားပြီး အောက်ကိုကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ရလာပြီ.အန်တီ လေးကပဲ အရင်းဆုံး သတိဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ကို တွန်းဖယ်လိုက်တယ်...ခွခေါင်းအုံးကို အန်တီလေးအမှတ်နဲ့ ပဲဖက်ပြီး အာဝါးတွေပေးနေလိုက်တော့တယ်.ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ ဘယ်ကမှန်ခွဲလို့မရဘူး.အန်တီလေးရဲ့ အနမ်းကိုခံဖို့ အတွက်ကျွန်တော့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ပြီးခေါင်းကို ငုံ ပေးထားလိုက်တယ်....တွေးနေတုန်း ကျွန်တော့နားထဲကို အသံတချို့ က ၀င်လာတယ်.မရီ သူတို့ နဲ့ ပတ် သက်တုံးက ရင်ခုန်တာနဲ့ အခုဟာကမတူဘူး..တခု ခုတိုက်မိ ပြုတ်ကျသံလို အသံမျိုး..
စကတည်းက ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ အဲဒီလူရဲ့ လက်တွေက ဆရာမကို တော်တော်လေးတော့ဖီးတတ်စေတယ်.သူ့ ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်လိင်တန်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်.နောက်ပြီး ဒေါ်နွယ်နီကိုများ နမ်းနေလိုက်တာ နှုတ်ခမ်းခြင်းခွါသံ လျှာခြင်းစုပသ်ံ တွေတောင်ကြားနေရတယ်.com တော်တော်လေးကို ကြမ်းတာ.အမွှေးတွေ ရိတ် ထားတဲ့ အဖုတ်ကြီးက ပြောင်ရှင်းပြီး ဖြူဖွေးနေတာပဲ. အပေါ်ကနေဆိုတော့ မြင်ကငွ်းကရှင်းနေတာပဲ.မကြီးပဲ ခံနိုင်ရိုးလား.သူတို့ နောက်ပေါက်ကို ဆွေဲနတာထင်တယ်.ပြီးတော့အဲ့လူကပဲ မှန်တင်ခုံပေါ်က ဘူးလေးတစ်ဘူးယူပြီး ဆရာမရဲ့ ဖင်ကြားထဲကို လိမ်းပေးလိုက် တယ်.တော်တော်လေးကို ကြပ်နေတယ်ထင်တယ်.တအင်းအင်းနဲ့ ကိုညီးရင်းဖင်ကြီးကို ကော့ကာလက်တွေကိုပြန်ဆောင့်ပေးနေတာ.နို့ တွေကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးပြောင်းစို့ ရင်း လက်တစ်ဖက်က ဆရာမရဲ့ ဖင်ထွားထွား ကြီးကိုကိုင်ညှစ် နောက်တစ်ဖက်က အဖုတ်ကြီးကို ထိုးဆောင့်နေလိုက်တာများ စည်းချက်ကိုညီနေတာပဲ .ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အငှားကားမောင်းတဲ့ Pdf-LA Page 21 .ဒီလိုနဲ့ နို့ တစ်လုံးခြင်းစီကို စို့ လိုက်ကိုင်လိုက်နဲ့ပြောင်းပြီး စို့နေတာ.နို့ စို့ နေရင်းကနေလည်း ဆရာမရဲ့ ကျောင်းစိမ်း ထမီလေးကို လှန်ပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီိကို တံခေါက်ကွေး လောက်ထိ ဆွချဲလိုက်တယ်.ကျွန်တော်တစ်ခုတော့တွေးလိုက် တယ်.စအိုတငွ်းဆက်ဆံတာကို ကြားဖူးနေတာတော့ကြာပြီ.အဲ့လူက ဆရာမနဲ့ ဖင်ကားကားကြီးနောက်မှာခွရပ်လိုက်ပြီး သူလိင်တန်ကြီးကို ဆရာမရဲ ဖင်ကြား ထဲကို ထိုးသွင်းတော့တာပဲ.ပြီးတော့ အဲ့လူက သူ့ လက်တွေကိုဆရာမရဲ့ အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းပြီး လက်နဲ့ ဆွေဲ တာ့ တာပဲ. ----အား--အင်းးး---အင်းး-ဆရာမဆီက အသံတွေထွက်လာတယ်.အမျိုးသားက သူ့ လက်ကိုအောက်ကို ချလိုက်ပြီး ဆရာမရဲ့ အဖုတ်ကြီးကို ဖိပွတ်လိုက်တယ်.တော်တော်လေးကြီးတယ်ဗျ.အဲလူကနမ်းနေရာကနေပြီး ဆ ရာမရဲ့ ကျောင်းဖြူအိင်္ကျီရင်ဖုံးကို ဆြွဲ ပီးဖြုတ်တော့တာပဲ .တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးသလို တစ်ခါမှလည်းမမြင်ဖူးဘူးလေကြည့်နေရင်းမှာပဲလိင်တန်ကြီး တစ်ချောင်းလုံး ဆရာမရဲ့ စအိုထကဲို ၀င်သွားတယ်.အဲ့ဒီတော့မှ သူ့ ရဲ့ လိင်တန်မဲမဲကြီးက ဒုံး ပျံတစ်ခုလို ပေါ်လာတယ်.ချောဆီသဘောထင်တယ်.ကျွန်တော်လည်းအဲ့ ဒီတော့မှ ဆရာမဒေါ်နွယ်နီရဲ့ အဖုတ်ကြီးကို မြင်ဖူးတော့တယ်.အဲ့လူရဲ့ လိင်တန်မဲမဲကြီးက ဆရာမရဲ့ ဖင်ကြားထဲကို တစ်ထစ်ခြင်း တိုးဝင်သွားတယ်.ဖွံ့ ဖွံ့ ထွားထွားဖင်လုံးကြီးနှစ်ခုကို ဆုပ်ချေလိုက်တာများ အားရပါးရကို အကြမ်းပတမ်း.ပြီးတော့သူ့ ပုဆိုးကို အောက်ကိုကငွ်းလုံးပဲ ချွတ်ချလိုက်တယ်.အသားကလည်းဖြူတယ်ဆိုတော့ ဖင်ကြီး ကဖြူဖြူဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်ထွားထွားကြီး.လိင်တန်ကြီးက အဆုံးကို တော်တော်လေးနဲ့ မရောက်နိုင်ဘူး.တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဲ့ လူရဲ့လက်တွေက လှုပ်ရှားမှုမြန်လာတယ်.တော်တော်လေးကို တင်းမာ နေပြီ.လက်တစ်ဖက်ကလည်း လွတ်နေတဲ့ နို့ တစ်လုံး ကို အားရပါးရကို ညစ်ချေနေတာ လက်ကအကြောတွေတော်ထောင်လာတယ်.ဆရာမရဲ့ အော်သံတွေလည်း ဆူညံသွားတာပဲ.အဲဒီလူကလည်း ဆရာမရဲ့ ဖင်ထွားထွားတုတ်တုတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး လိင်တန်ကြီးကို နှဲ့ နှဲ့ ပြီးကိုသငွ်းနေတာ. ခဏလောက်ထပ်ကြာတော့ အဲ့ဒီလူက လှုပ်ရှားနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ဆရာမကို ကုတင်ပေါ် လေးဖက်ထောက် တွန်းလှဲလိုက်တယ်.ကြီးလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီးဗျာ နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး.ရင်ဖုံးအိင်္ကျီလေး ရင်ပငွ့်သွားတာနဲ့ ဘော်လီိကို အပေါ်လှန်တင်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဒေါ်နွယ်နီရဲ့ နို့ ကြီးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ကိုဆွဲစို့ တော့တာ .အဖုတ်ထဲ့ ကိုလက်အ၀င်အထွက်ကလည်း ပိုပြီးမြန်ဆန်ပြင်းထန်လာတယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.mmcybermedia.ဆရာမကြီးတစ် ယောက် လက်ဒဏ်နဲ့ တင်ကော့ပျံသွားတယ်. ပြီးတော့ထမီကို ခါးပေါ်ထိဆလွှဲန်လိုက်တယ်.ဟာကိုလူလေး.ကျွန်တော်ကတော့ အောက်ကလူထက်ပိုကြီးတယ်ဗျ.ပြီးတော့ ဆရာမ ရဲ့ ညီးညူသံတွေ ကလည်း ပြီးပြီးပြင်းထန်လာတယ်. ဒါနဲ့ အောက်ကဇာတ်လမ်းကိုပြန်ဆက်ဦးမယ်.အဲ့လူကလိင်တန်ကြီးကို ဆရာမရဲ ဖင်အိအိကြီးမှာ အဆုံးထိဖိကပ်သငွ်းရင်း ခေါင်းလည်းတ ဖြည်းဖြည်းမော့လာတယ်.ဒေါ်ကရင်မကြီးနဲ့ ဖြစ်ပြီးကတည်းက ဆေးမျိုးစုံလိမ်းလာတာလေ.ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖောင်းဖောင်းကြီး လက်ဝါးတစ်အုပ်စာမကဘူး.
ဆောင့်ချက်တွေက အားပါလာ သလို အခြေအနေတွေကလည်း ဆိုးဝါးလာတယ်.ဆရာမလည်း ခါးကော့သွားပြီ ဆံပင်တွေလေထဲဝသွဲားတဲ့ အထိကို ခေါင်းကိုခါလိုက်တယ်.အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကိုလူလေးကသူဆောင့်ချက်တွေကို ထပ်ပြီးအရှိန်မြှင့်လိုက်တယ်.ဆရာမခင်မျာလည်း တော်တော်လေးကို ကြိတ်မိတ်ခံနေရပုံပါ.ကိုလူလေးက ဆရာမရဲ့ ခါးကနေဆွဲပြီး လိင်တန်ကြီးကို တ၀တ်လောက်ထိ ဆွထဲုတ်လိုက် ပြန်ဖိ သွင်းလိုက်နဲ့ ကိုလှုပ်ရှားနေတာ.ကိုလူလေးက သူလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆရာမရဲ့ ခါးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆလွဲိုက်ရင်း ဖွံ့ ထွားဖြူဖွေးတဲ့ ဖင်ကြီးကိုအားရပါရကိုဆောင့်ချလိုက်တယ်.သူတို့တွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးချိတ်မိကြသလဲတော့မသိဘူး.မရပ်တော့ဘူး ပိုပိုပြီးအရှိမြင့်လာပြီး သိပ်မကြာလိုက်ဘူး.mmcybermedia.နောက်ကနေပြီးဆောင့်လိုက်တာများ ဆရာမရဲ့ ဖင်တုန်ကြီးကို သူ့ ဆီးစပ်နဲ့ ဆောင့်မိတိုင်း ဆ၇ာမရဲ့ ဖင်တုန်ကြီး အိကနဲအိကနဲ တုန်သွားတယ်.အ၀င်အထွက်တွေက ပိုပိုပြီးချောမွေ့ လာတယ်.လိင်တန်ကြီး ကလည်း ဖင်ဝကိုထိုးခြွဲ ပီး အခေါင်းထဲကို တောက်လျှောက်ကို ထပ်ဝင်သွားတယ်.သူတို အကြောင်းကို ကျွန်တော်လည်းကြာကြာစိတ်မ၀င်စားနိုင်ပါဘူး.ကျွန်တော့ဆီကတောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကြားနေရတယ်.ကျွန်တော့ဆီကတော့ အသံတွေ သိပ်မကြားရဘူး.ကိုလူလေးရဲ့ လက်တွေက လည်းဆရာမရဲ့ နို့ ကြီးတွေကို လှမ်းဆွလဲိုက်ပြီး ဖြစ်ညစ်နေလိုက်သေးတယ်.ကိုလူလေးရဲ့ ကိုယ်တစ်ခုလုံးတုန်ခါ သွားပြီး ဆရာမပေါ်မှောက်ရက်ကျသွားတယ်. ကိုလူလေးရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း ပိုပြီး ပြင်းထန်လာတယ်.အန်တီမမများမများ-သားဆိုး-www.အသွင်းအထုတ်တွေလည်း ပိုပိုပြီးမြန်ဆန်လာတယ်. ငြီးညူသံတွေ ထွက်လို .ပြီးတော့မှ သူလိင်တန်ကြီးကို ဒစ်ပေါ်ရုံလောက်ထိထုတ်ပြီး ပြန်ဖိသငွ်းလိုက်တယ်. Pdf-LA Page 22 .ဆရာမရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက ၀လုံးပုံစံကို ၀ိုင်းပြီးငြီးညူနေတာ.စအိဝုဆိုတော့ ဖုတ်လောက် တော့ အ၀င်တွေက မချောမွေ့ ဘူး.တော်တော်လေး ကို ပြင်းထန်တယ်နဲ့ တူတယ်.ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနဲ့ ကို သူတို့ လှုပ်ရှားနေရတာ.ဆရာမရဲ့ ဆံထုံးဆို ပြေပြီး ဖားယားကျနေပြီ.ကိုလူလေးက သူလိင်တန်ကြီးကို ဆရာမရဲ့ ဖင်ဝမှာ စပြီးအသွင်းအထုတ်လေး လုပ်လာတာကိုး.တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ချောဆီတန်ခိုးကြောင့်ထင်တယ်.ကိုလူလေးမှာလည်း မိန်းမရှိတယ်.com ကိုလူလေး.
Documents Similar To 44674276-42114497-အန်တီမမများ
Aung Min Thin
Teo Siew Leong